နေရာတိုင်းမှာ ဟတ်ပီးနယူးယီးယားလို့နှုတ်ဆက်သံတွေ ကြားနေရတော့ ဘလော့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ဟတ်ပီးနယူးယီးယားလို့နှုတ်ဆက်ရင်း၊ အသူ တဂ်ထားတဲ့ ၂၀၁၄ ရီဗျူးတဂ်ပို့ စ်လေး ရေးဖြစ်သွားပါတယ်။၂၀၁၄ ကို ရီဗျူးကြည့်လိုက်ရင် ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့နှစ်လို့ဆိုရမယ်။
မနှစ်က ဒီဇင်ဘာမှာ နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာတာဆိုတော့ ခုကုမ္ဗဏီမှာ လုပ်တာ တစ်နှစ်ရှိပြီ။ အခက်အခဲတွေ များလွန်းလို့အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာတဲ့ အလုပ်ဆိုတော့ ပင်ပန်းပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးတယ်။ ကျွန်မ လုပ်ဖူးသမျှ အလုပ်တွေမှာ ခုကုမ္ဗဏီအလုပ်က ချဲလန့် အဖြစ်ဆုံး၊ စိတ်ဖိစီးမှု အများဆုံး၊ အပင်ပန်းဆုံး။ Consultant ဆိုတော့ ကလိုင်းရင့်ရုံးတွေမှာ သွားလုပ်ရတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်၊ နည်းပညာအသစ်၊ work flow အသစ်တွေ လေ့လာရတယ်။ ကလိုင်းရင့် ကွန်းထရပ်ကုန်သွားလို့ရုံးချုပ်ကို ပြန်ရောက်ရင် ပရောဂျက် ၂၊ ၃ ခုကို တပြိုင်တည်း လုပ်ရတယ်။ သူဋ္ဌေးမက အော်ရင် တခြားသူတွေက ဘာမှပြန်မပြောပေမဲ့ ပြန်အော်ဟစ်တဲ့ ကျွန်မကို အလွယ်တကူ အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ အလုပ်ဖြုတ်နိုင်၊ တခြားဈေးပေါတဲ့ တရုတ်လုပ်သားတွေ ငှားနိုင်ပေမဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ လစာတိုးပေးပြီး ကျွန်မ အလုပ်ကြိုးစားတာကို အသိအမှတ်ပြုတော့ ကျေနပ်မိတယ်။
အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရဦးမယ် ကျွန်မက အလုပ် ကံကောင်းတတ်တယ်။ စင်္ကာပူအလုပ်တုန်းကလည်း လစာလည်းမဆိုး၊ စိတ်ဖိစီးမှုလည်း သိပ်မရှိ၊ နှစ်တိုင်းလစာတိုး၊ ဘောနပ်လည်းပေး၊ နိုင်ငံခြားခရီးတွေလည်း သွားရတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ အဲဒီကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်ရချင်ကြတယ်။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလွန်းကြတဲ့ စင်္ကာပူမှာ ကျွန်မ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ခုထိ အဲဒီကုမ္ဗဏီမှာ လုပ်နေကြတုန်း။ ကန်တက်ကီအလုပ်ဆိုရင်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ဗဏီ၊ အားလုံးက Thermal ၊ Pipe ၊ Structural ၊ Chemical ၊ Mechanical အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ အသက်၊ မိန်းမ၊ ယောကျာ်း၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမှု မရှိတဲ့ အမေရိကန်မှာ ကိုယ်တော်ရင် တော်သလို ကိုယ့်အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုတော့ စင်္ကာပူမှာထက် အမေရိကန်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ အလုပ်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဘာမှ စိတ်ဖိစီးမှုကို မရှိတာ။ ကယ်ပီတယ် Capitol နဲ့ဘေးချင်းကပ်လျက် ရုံးနေရာလေးကို သိပ်သဘောကျတာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီအလုပ်ကြောင့် နေရှင်နယ်မောလ်တလျှောက်က ပြတိုက်တွေ ပြဲပြဲစင်ခဲ့တာပေါ့။
ကျန်းမာရေးကတော့ ဒေါင်ဒေါင်မြည်တယ်လို့ဆိုရတယ်။ နယူးယောက်ရောက်မှ ပိုကျန်းမာတယ် လမ်းလျှောက်ရလွန်းလို့ ။ အိမ်ကနေ ဘူတာရုံကို ငါးမိနစ်၊ ဘူတာတွေမှာ ရထားပြောင်းဖို့လျှောက်ရတာက ငါးမိနစ်၊ ဘူတာကနေ ရုံးကို ငါးမိနစ်၊ တနေ့ ကို နာရီဝက်မက လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ၂၀၁၃ ဂျူလှိုင် ၄ နယူးယောက်ကို လာလည်တုန်းက ဟ...နယူးယောက်သားတွေက လမ်းလျှောက်တာလား၊ ပြေးနေတာလားလို့တွေးတာ ခုတော့ ကိုယ်တိုင် ပြေးနေတယ်။ ပိတ်ရက်တွေဆို လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ တွေနဲ့၎ မိုင်ကနေ ၆ မိုင်အထိ လမ်းလျှောက်၊ တောင် ၈ မိုင်တက်၊ နယူးယောက်မြို့ ထဲမှာ ဆိုရင်လည်း တဘူတာ၊ နှစ်ဘူတာလောက်ဆို ရထားမစီးဘဲ လမ်းလျှောက်တော့ နယူးယောက်မှာ လမ်းအတော် လျှောက်ဖြစ်တယ်။ နယူးယောက်မှာ နှေးတိနှေးကွေး လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေဆိုကြည့်လိုက် အဲဒါ အသက်ကြီးတဲ့သူ၊ ဖုန်းပြောနေတဲ့သူ၊ နယူးယောက်သားမဟုတ်သူတွေ။ နယ်တွေမှာက ဟိုနားနဲ့ဒီနားတောင် ကားမောင်းပြီး ကားပေါ်က မဆင်းရတော့ တခြားပြည်နယ်ကသူတွေ နယူးယောက်တက်လာရင် လမ်းမလျှောက်နိုင်ကြဘူး။
တနေ့ ကို ဆယ်ငါးမိနစ် လေ့ကျင့်ခန်း၊ ပိတ်ရက်တွေဆိုလည်း လမ်းသွားလျှောက်နေလို့အရမ်းစားပေမဲ့ ဝိတ်တက်မလာဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်ခန့် က လက်ဆစ်တွေ ရောင်ပါတယ်။ လေးဖက်နာ၊ ဂေါက်၊ ယူရစ်အက်ဆစ် များနေတာလို့တွေးကြတယ်။ အမဲသားလို အနီရောင်များတဲ့အစာ၊ ပင်လယ်စာ၊ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့ဟာ ဟင်..မြေကြီးထဲက အားလုံးထွက်တာပဲဟာ.. မြေကြီးထဲက တိုက်ရိုက်ထွက်တဲ့ မှို၊ မျှစ်၊ အာလူး၊ မုန်လာဥတွေ ရှောင်ရမယ်။ အဲဒီအသီးတွေတော့ ရှောင်နုိုင်ပေမဲ့ ပင်လယ်စာတော့ မရှောင်နိုင်ဘူးရယ်။ ဒီတော့ လက်ဆစ်တွေ ရောင်လိုက်၊ သက်သာလိုက်နဲ့ သွေးသွားစစ်ရဦးမယ်။ သွေးစစ်တဲ့အဖြေရမှာ ဘာတွေ များနေလည်း သိရမယ်။ အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်တွေ မစားတော့ဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တာတွေ ပိုစားဖြစ်တယ်။
၄ နှစ် ကြာပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ မာစတာဘွဲ့ ကို အောင်မြင်စွာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူများတွေက ၂ နှစ်ခွဲ ၊ ၃ နှစ်လောက်ပဲ ကြာတဲ့ဘွဲ့ ကို ကျွန်မက အလုပ်ဗီဇာ အဆင်မပြေသေးလို့Specialization Course ယူ သုံးဘာသာ ထပ်ယူပြီး တစ်နှစ်ထပ်တိုးတယ်။ စင်္ကာပူကျောင်းတုန်းကတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၄ ရှိတဲ့ စင်္ကာပူတက္ကသိုလ် ကျောင်းထွက်ကွလို့ဟစ်ကြွေးပေမဲ့ ယူအက်စ်ကျောင်းကတော့ နာမည်ကြီးကျောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့ တိုင်းညဥ့်နက်တဲ့အထိ အဆိုင်းမင့်၊ ပရောဂျက်တွေ လုပ်၊ နောက်နေ့ အတွက် စာဖတ်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဆုံး အစားအသောက်၊ ရာသီဥတုက အေး၊ ဗမာဆိုလို့တစ်ယောက်တည်းနဲ့ယူအက်စ်ကျောင်းမှာ တစ်နှစ်ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဟာ အင်မတန်ခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေဆီ သွားပြီး အင်တန်းရှစ်အတွက် အလုပ်ရှာ၊ အလုပ်ရတဲ့မြို့ ၊ ရုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ နေသားကျဖို့ ၊ အလုပ်သစ်မှာ အဆင်ပြေဖို့ ၊ အပတ်တိုင်း အဆိုင်းမင့်၊ တလတခါ စာမေးပွဲ၊ ၃လတခါ ရီပို့ တင်ရ၊ အလုပ်ပိလို့စာမကြည့်နိုင်၊ စာမကြည့်နိုင်လို့စိတ်ဖိစီးနဲ့အလုပ်အချိန်ပြည့်လုပ်ပြီး အဝေးသင်တက်ရတာ အင်မတန် ပင်ပန်းတယ်။ ဒါတောင် ကျွန်မက လူလွတ်မို့။ စူပါမိန်းမတွေလို့ကျွန်မ လေးစားအားကျရတဲ့ အစ်မတွေဆို ကလေးတဖက်၊ အချိန်ပြည့်အလုပ်တဖက်၊ စာမေးပွဲတွေကိုလည်း အောင်အောင် ဖြေလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်မ သူတို့ လောက် မလုပ်နိုင်ဘူး။
ကျွန်မက မိုင်းဖန်လို ဘာသာရပ်တွေအားလုံး အေရတဲ့ ကျောင်းသားမဟုတ်ဘူး။ တချို့ ဘာသာရပ်တွေက အေ၊ တချို့ က ဘီ၊ တချို့ က စီပလပ်၊ ဘာသာနှစ်ခုဆို NC Not Credit ရတာ ရှိသေးတယ်။ ဘာသာရပ်အားလုံးမှာ GPA 3.0 ၊ 36 credits နဲ့ညီမျှတဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်းရင့် ဘာသာရပ် ၉ ခု၊ 500 level courses တွေဖြစ်တဲ့ Advanced Software Developement (ASD) Advanced Programming Language (APL) ၊ Web Application Architecture (WAA) လို ခက်တဲ့ဘာသာတွေ၊ မယူမနေရ Algorithms ဘာသာရပ်တွေမှာ ဘီရပါမှ ဘွဲ့ ရမှာပါ။ ASD ဘာသာကို ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဂပ်သရီသင်ရင် အကျများတယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျတာ။ ဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားရလို့ကျောင်းကို မကြိုက်ပေမဲ့ လည်း အဲဒီမာစတာဘွဲ့ ကို ကျွန်မ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရှိတာ ကျွန်မ ကံကောင်းတယ်။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းအားလုံး ကျွန်မကို ချစ်ကြတယ်။ နောက်ကျောဓားနဲ့ ထိုးတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး မတွေ့ ခဲ့ဘူး။ မကြီးသူငယ်ချင်း၊ အဲဒီသူငယ်ချင်းရဲ့အစ်မ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကပါ ကျွန်မကို ချစ်ခင်ကူညီစောင့်ရှောက်တယ်။ ဘီအေစီမှာ လုပ်အားပေးရင်း သိခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ မမင်းမင်း၊ ကန်တက်ကီအိမ်ရှင် အမေရိကန်မ မန်ဒီ၊ မေရီလန်းက မင်္ဂလာရာမဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သိခဲ့တဲ့ မမီးမီး၊ မမီးမီး သူငယ်ချင်း မဝိုင်း၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီရုံးက ကလဲရား၊ နယူးယောက်က ကျွန်မမွေးစားအမေ မဂင်ကြူတို့မိသားစု၊ ဘလော့ဂါ မမီးငယ်၊ ဘလော့ပရိတ်သတ် ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားက မခိုင်၊ မခိုင် သူငယ်ချင်း ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စီနီယာ မဆာဖီးယား၊ နယူးယောက်ရုံးက ပတ်ထရီချာ၊ မကြီးသူငယ်ချင်း မကေသွယ် သူငယ်ချင်း မနန်းစံ၊ မကြီးသူငယ်ချင်း မနီနီအောင်အစ်မ မမီမီအောင်၊ အလှုတွေ ဖိတ်တတ်တဲ့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ကိုထွန်းထွန်းဝင်း၊ ကျွန်မနဲ့သိကျွှမ်းတဲ့သူတွေတိုင်း ကျွန်မကို ကူညီစောင့်ရှောက်ကြတာချည်းပဲ။
ဘာသာစကားတစ်ခု၊ အတီးအမှုတ်တစ်ခု၊ အားကစားတစ်ခု တတ်မြောက်ချင်တာ ကျွန်မရဲ့dream ပါ။တရုတ်စာကို ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာ တစ်နှစ်သင်ဖူးလို့နည်းနည်းသိတယ်။ ဂျပန်စာ တလသင်ဖူးလို့နည်းနည်းလေး သိတယ်။ ကိုရီးယားကားတွေကြည့်လို အိုပါး အညာဟတ်ဆိုင်ရော် တတ်တယ်။ ဂီတာတီးသင်မယ်ဆိုပြီး ဂီတာဝယ်၊ ယူကျူ့ ကနေ လက်ကွက် သုံးခုသိ၊ ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးသီချင်းကို ဒန်ဒန်လို့တီးတတ်၊ ဆောင်းတွင်းမှာ ဂီတာ အပြတ်သင်မယ်လို့ကြုံးဝါးပေမဲ့ ပင်ပန်းလို့ ၊ မအားလို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ နဲ့ဂီတာတီး မသင်ဖြစ်တော့တာ ခုဆို ဂီတာက ကုတင်ခြေရင်းမှာ အခန်းအလှဆင်ပစ္စည်း ဖြစ်နေတော့တယ်။ အားကစားကတော့ သိတဲ့အတိုင်း လမ်းလျှောက်၊ တောင်တက်တာလောက်ပဲ။ မေရီလန်းအိမ်နားက မတ်သရူးဟတ်ဆန်ထရေးလမ်း၊ ဆူနမ်တို့ အိမ်နားက ရေကန်နားမှာ jogging ပြေးရတာ ကြိုက်ပေမဲ့ နယူးယောက် ပြောင်းလာပြီးကတည်းက မ jogging တော့တာ။ biking ထွက်ချင်ပေမဲ့ စက်ဘီးတင်သွားမဲ့ ကားမရှိ။ ဒီလိုနဲ့ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မလုပ်ဖြစ်ဘူး။
ဗီယက်နမ်တက္ကသိုလ်မှာ ကတည်းက နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခု မသင်မနေရဆိုတော့ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ လေးနှစ်တာမှာ ပြင်သစ်စကား သင်ခဲ့တော့ ဝိုင်းက ပြင်သစ်စကားကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်တယ်။ အီတလီမှာနေတုန်း စပိန်စကားကို နှစ်နှစ်သင်ခဲ့ပြီး ခုလည်း စပိန်စကား သင်နေတဲ့ ဝိုင်းက စပိန်စကား အခြေခံ ပြောတတ်တယ်။ ဝိုင်းက အားကစားရုံမှာ ညနေတိုင်း zomba ၊ ballet ၊ abdomian ၊ yoga ကလပ်တွေ သွားတက်တယ်။ စန္ဒရားကို နှုတ်စ်ကြည့်ပြီး သီချင်းငါးပုဒ်လောက် တီးတတ်ပါသတဲ့။ ဝိုင်းက ကျွန်မ လုပ်ချင်တာတွေ အကုန်လုပ်တယ်။ မသိရင်လည်း မသိဘူး၊ သိရင်လည်း သိတယ်၊ နည်းနည်းလေး သိတယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူး ၊ half baked ဆိုတာ စားလို့ မကောင်းဘူးဆိုပြီး ဝိုင်းက ကျွန်မကို တရုတ်စာ ဆက်သင်ဖို့အားပေးနေပါတယ်။ သိလား ဦးနှောက်ဆိုတာ သင်ယူနေမှ ကောင်းတာကွ ဦးနှောက်ဆိုတာ သင်ယူဖို့ ။ ဘာမှ မသင်ရင် အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ Canon 7D ကင်မရာကို အော်တိုနဲ့ သာ ရိုက်တတ်လို့ကင်မရာကို ဘယ်လိုအသုံးချရမယ်ဆိုတာ လေ့လာနေပါတယ်။ ISO ၊ shutter speed ၊ aperture တွေနဲ့ဖိုတိုဂရပ်ဖီကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသား။ ရထားစီးတဲ့ အချိန်တွေဆို ကင်ဒယ်နဲ့စာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဒယ်နဲ့ဖတ်ရတာ စာအုပ်ကိုင်ပြီး ဖတ်ရသလိုပဲ။ အသက်ကြီးလာလို့ လား မသိဘူး ဆူဆူညံညံတွေထက် relaxation တီးလုံးတွေ ပိုကြိုက်လာတယ်။
၂၀၁၄ မှာ ခရီးတွေ ပိုသွားဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ကျီ၊ ဖက်ရှင်၊ အစားအသောက်တွေမှာ ပိုက်ဆံသိပ်မသုံးတော့ဘဲ ခရီးသွားတာမှာ ပိုက်ဆံပိုသုံးဖြစ်တယ်။ မနှစ်က အိုမားတို့ အိမ်မှာ ဟော့ပေါ့စားပြီး နယူးရီးယားကို ကြိုဆိုပေမဲ့ ဒီနှစ်တော့ အိုမားတို့ က မြန်မာပြည်ပြန်တော့ နယူးရီးယားမှာ သွားစားရမဲ့အိမ်မရှိ။ တိုင်းစကွဲကောင့်ဒေါင်း သွားရအောင်လို့ဝိုင်းကပြောတော့ အင်းပေါ့။ ရာသီဥတုအေးလို့ဝိုင်းရေ မသွားတော့ဘူးဆိုတော့ ဝိုင်းက သူ့ ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း သွားမယ်တဲ့။ ည ၁၁ လောက် တိုင်းစကွဲယားနားသွားပြီး ကောင့်ဒေါင်းသွားအော်မလို့ တဲ့။ တိုင်းစကွဲနယူးရီးယားကောင့်ဒေါင်းက နာမည်ကြီးတယ် လူတစ်သန်းလောက် တက်ရောက်ကြတာ။ နေရာကောင်းဆို နေ့ လည်ကတည်းက သွားရတာ။ ဒီလောက်အေးတဲ့ ရာသီဥတုကြီးမှာ ၆ နာရီလောက် မတ်တပ်ရပ်နေရမှာ ပြန်ထွက်ဖို့ လည်း မလွယ်။ လူတွေပြည့်သွားရင် ရဲတွေက ပိတ်လိုက်ပြီး လုံးဝဖြတ်ခွင့် မပေးတော့တာ။ ဟတ်ပီးနယူးရီးယား အော်ရဖို့အဲဒီလောက် ဒုက္ခမခံနိုင်ပါဘူးနော်။ အမှတ်တရဖြစ်တဲ့ နယူးရီးယားကောင့်ဒေါင်းကတော့ ၂၀၀၈ စင်္ကာပူက West Coast ကမ်းခြေမှာ ဝယ်လာတဲ့ ကြက်ကြော်စား၊ punch သောက်၊ ဘေးက ဆိုကြတီးကြတဲ့ သီချင်းကို နားထောင်၊ tent လည်းမရှိ ခင်းထားတဲ့ တာလာပတ်ပေါ်မှာ ပုဝါ၊ စောင်ပါးလေးခြံလို့New Year Eve ဖြစ်လို့နေ့ တဝက်ရုံးဆင်းပြီး ကတည်းကနေ ညနေစောင်း ကမ်းခြေကို မလာခင်လေးအထိ လျော့ပင်းထွက်ကြတဲ့ ကျွန်မတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက် အိပ်ပျော်သွားလိုက်ကြတာ ဘေးကနေ မအိပ်ဘဲ ထိုင်စောင့်တဲ့ မခိုင်က မနက် ၅ နာရီလောက်မှာ နှိုးတော့မှ နှိုးတော့တယ်။
နယူးရီးယားနေ့ မှာ နယူးရီးယားဟိုက်ကင်းနဲ့နယူးရီးယားကို ဟိုက်ကင်းစွာနဲ့ကြိုဆိုပါ့မယ်။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ နှစ်သစ်မင်္ဂလာလေး ဖြစ်ပါစေ။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄။
ဆွဇ် (သို့ မဟုတ်) ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဆိုတာနဲ့တန်းသိကြမှာက ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့ အစည်းကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဟင်နရီဒူးနန့် ၊ သူ့ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အဖြူရောင်နောက်ခံမှာ အနီရောင် အပေါင်းလက္ခဏာပါတဲ့ သူ့ ဇာတိ ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံအလံ အရောင်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ အလံ။ အလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းတုန်းက သမိုင်းဘာသာရပ်မှာ သင်ခဲ့ဖူးလို့ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ နဲ့ တွဲပြီး ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံကို သိခဲ့ပါတယ်။ နည်းနည်းကြီးလာတော့ ဆွဇ်မိတ် နာရီတွေ နာမည်ကြီးမှန်း သိလာတယ်။ ရိုးလက်၊ အိုမီဂါ၊ Swatch တို့ဘာတို့ ပေါ့။ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ဘလော့ကနေတဆင့် အဲပက်စ်တောင်တန်းအလှတွေကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရတော့ ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံက အတော်လှပါလားလို့သိလာတယ်။ ဆွဇ်ဇာလန်နို်င်ငံ ဇူးရစ်မြို့ ကို ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်ဖူးတယ်။ ဒါတွေကတော့ ကျွန်မသိသမျှ ဆွဇ်ဇာလန် အကြောင်းပါ။ ဘန်ကောက်နဲ့ပါရီမှာ ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ်ရတာက အီတလီနိုင်ငံ Rome မြို့(အီတလီလို ရိုးမားလို့အသံထွက်ပါသတဲ့။ ရိုးမားဆိုလို့အီတလီစီးရီးအေက ရိုးမားဘောလုံးအသင်းကို သတိရမိသွားတယ်) က ယူအန်ရုံးမှာ ဝိုင်း အလုပ်ရပါတယ်။ အီတလီမှာ ၇ နှစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ ဒီနှစ်နွေမှာ နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာပါတယ်။
လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ တွေနဲ့လမ်းလျှောက်ရင်း ဝိုင်းနဲ့အသိမိတ်ဆွေဖြစ်လာပြီးတော့ ခရီးတွေ အတူသွား၊ တောင်တက်၊ လမ်းလျှောက်နဲ့သူငယ်ချင်းညီအစ်မတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဝိုင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထဲမှာ ဆွဇ်လူမျိုး နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ဝိုင်းက ဆွဇ်လူမျိုးတွေကို အင်မတန် လေးစားသမှု ဖြစ်လာတာ အဲဒီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် နှစ်ယောက်ကြောင့်ပါတဲ့။ ပထမလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်က အင်မတန် အချိန်တိကျလေးစားတယ်။ ၁၀ နာရီမှာ ဖုန်းခေါ်မယ်လို့ပြောထားရင် ၁၀ နာရီ ၁ မိနစ်မှာ ဖုန်းမြည်လာမယ်။ ၁၀ နာရီ ၁ မိနစ်မှာမှ ဖုန်းမမြည်ရင် တခုခုဖြစ်နေလို့ ပါတဲ့။ Swatch နာရီကြိုးကို အသစ်လဲတာက နာရီအသစ်နီးပါးလောက် သွားကျတော့ ကြိုးအသစ်လဲမဲ့အစား နာရီအသစ်ဝယ်ပါလားလို့အကြံပေးတော့ နာရီဒိုင်ခွက်က အကောင်းကြီး၊ ကြိုးလဲလိုက်ရုံနဲ့ပတ်လို့ ရတယ်၊ waste မဖြုန်းချင်လို့ ၊ အသစ်ဝယ်မဲ့အစား အဟောင်းကို ပြန်သုံးတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမူကို နည်းနည်း အထောက်အကူ ဖြစ်တာပေါ့ contribute little bit in environmental pollution တဲ့။ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့ကြိုးအသစ်လဲတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထည့်စဉ်းစားလို့ နာရီအသစ် မဝယ်ဘဲ ကြိုးအသစ်လဲတာ။ ဝိုင်းက ငါသာဆိုရင် ကြိုးအသစ် မလဲတော့ဘူး ကြိုးအသစ်လဲတာက နာရီအသစ် နီးပါးလောက် သွားကျတော့ နာရီအသစ်ပဲ ပတ်တော့မှာပေါ့လို့ ပြောရင် ကျွန်မကလည်း me too ။
အဲဒီဆွဇ်နဲ့ကျွန်မတို့ တွေ ကွာတဲ့အချက်က ကျွန်မတို့ တွေက ကိုယ့်အတွက်ပဲ စဉ်းစားတယ်ပြီး အဲဒီဆွဇ်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် စဉ်းစားတယ်။ ဇူးရစ်မြို့ ကို အစည်းအဝေးပွဲကိစ္စအတွက်နဲ့ သွားတုန်းက နေ့ လည်ထမင်းစားပြီးချိန် ရုံးကိုပြန်ကြတော့ အဲဒီဆွဇ်နဲ့ပြန်ဆုံပါတယ်။ ရုံးကို ဘယ်လိုပြန်ကြမလဲ၊ တက္ကစီစီးမလား၊ ဘတ်စ်ကားစီးမလား ပြောဆိုကြတော့ ဝိုင်းနဲ့သူ့ ဘော့စ်က တက္ကစီး ပြန်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုတော့ အဲဒီဆွဇ်က ဘတ်စ်ကားစီးပါလားတဲ့။ ဘတ်စ်ကားစီးဖို့လက်မှတ်ဝယ်ရမှာ၊ သူတို့ မှာ ဆွဇ်ငွေ franc ဖရန့် မရှိတော့ တက္ကစီပဲ စီးတော့မယ်၊ တက္ကစီနဲ့ ဆို ကဒ်နဲ့ပေးလို့ ရတယ်လို့ဝိုင်းဘော့စ်ကပြောတော့ အဲဒီဆွဇ်က ဘတ်စ်ကားစီးပါ၊ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ကို သူကိုယ်တိုင် ဝယ်ပေးပါမယ်တဲ့။ တက္ကစီခ မတတ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူးနော် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှင့်တာ လျှော့နည်းအောင်လို့ ။ ဝိုင်းရဲ့ ဘော့စ်က အီတလီမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသားဆိုပေမဲ့ ဝိုင်းတွေ့ ဖူးတဲ့ အီတလီတွေထက်ကို အီတလီပိုဆန်ပါသတဲ့။ အီတလီဆန်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုချင်ပါလိမ့် ဖက်ရှင်ကျတာကို ဆိုချင်တာများလား။ ဝိုင်းဘော့စ်က အထက်တန်းကျတယ်၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်ဆုိုပေမဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထက် ကိုယ်သက်သာဖို့ ကို ပိုတွေးတယ်။ အဲဒီဆွဇ်ကတော့ ကိုယ်သက်သာဖို့ ထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုတွေးတယ်။
ဝိုင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆွဇ်အမျိုးသမီးက ဇူးရစ်ကနေ Rome ဆီ အစည်းအဝးလာတက်ရင် ရထားစီးလာလေ့ရှိတယ်။ ရထားလမ်းတလျှောက်က ရှုခင်းတွေက လှလို့ရထားစီးတာလား (ရထားခက လေယာဉ်ခထက် ပိုဈေးကြီးတယ်) လို့ မေးတော့ ရထားက လူတွေအများကြီး သယ်ယူပို့ ဆောင်ပေးလို့ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှင့်တာနည်းလို့ဈေးကြီးပေမဲ့လည်း ရထားပဲ စီးပါသတဲ့။ ပစ္စည်းဝယ်ရင် ကုမ္ဗဏီက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးမှာ ပါဝင်တဲ့၊ ကလေးအလုပ်သမား မသုံးဘူးဆိုတဲ့ SRA ဆိုလား ဘာဆိုလား အမှတ်တံဆိပ်ပါတဲ့ဟာကိုမှ ဝယ်သုံးပါသတဲ့။ အဲဒီတံဆိပ်ပါရင် ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်။ တိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းတွေ မပါဝင်ရင် Vegan ဆိုတဲ့ ဗွီတံဆိပ်၊ အော်ဂင်းနစ်တွေ သုံးရင် အော်ဂင်းနစ်တံဆိပ်ပါသလိုမျိုး နေမှာပေါ့။ ကျွန်မတို့ တွေကတော့ အဲဒီတံဆိပ်ထက် ဈေးသက်သာဖို့ က ပိုအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီဆွဇ်နှစ်ယောက်ကြောင့် ဝိုင်းဟာ ဆွဇ်လူမျိုးတွေကို တော်တော်အထင်ကြီး လေးစားပါသတဲ့။ ကျွန်မတို့ တွေ စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးကို အထင်ကြီးလေးစားသလိုမျိုးနေမှာပေါ့။ အထက်တန်းလွှာဆွဇ်တွေက ကလေးတွေ အသက် ၁၈ ပြည့်ရင် ရိုးလက်နာရီတစ်လုံး ပေးတယ်တဲ့။ ဝိုင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်း အမေရိကန်မလေးက အလုပ်လုပ်တာ ပင်ပန်းလို့သူ့ ကိုယ်သူ ဆုချတဲ့အနေတဲ့ ရိုးလက်ဇ်တစ်လုံး ဝယ်ဦးမယ်ဆိုတော့ ဝိုင်းက ဘယ်လောက်လဲမေးတော့ ဒေါ်လာ ၁ သောင်းတဲ့။ အောင်မလေး ဈေးကြီးလိုက်တာ ၅ ထောင်တန်လောက် မရှိဘူးလား။ ၁ သောင်းအောက် မလျှော့ဘူးတဲ့။
အိုမီဂါလည်း ဈေးကြီးတယ် ၄ ထောင်ကနေ ၆ ထောင်ကျော်တယ်။ ဝိုင်း ပြောမှပဲ Longines ဆိုတာ သိတော့တယ် ရိုးလက်၊ အိုမီဂါနဲ့ ယှဉ်ရင် ဈေးက မဆိုးဘူးပဲ။ Longines တစ်လုံးလောက် ဝယ်ဦးမယ် ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်မမှာရှိတဲ့နာရီက စင်္ကာပူမှာ ဝယ်ခဲ့တဲ့ Guess တံဆိပ်၊ မကြီးမှာက CK ၊ မောင်မောင်မှာက ကျွန်မ မွေးနေ့ လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ Emporio Armani ။ အဖေက သားရေကြိုး၊ ဒိုင်ခွက်ပြားတဲ့နာရီ ကြိုက်တယ်။ အင်တာဗျူးသွားရင် နာရီပတ်ပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဖုန်းပေါ်က အချိန်ကိုပဲ ကြည့်ဖြစ်တော့ နာရီသိပ်မလိုပေမဲ့ နာရီဝတ်တာ စတိုင်ကျတယ်လို့ထင်တယ်။ မကြီးကို Longines သိလားလို့ မေးတော့ သိတယ်တဲ့ မယ်ကမ္ဘာ ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီး ကြေငြာတယ်လေတဲ့။ နာရီတွေထဲမှာ ဈေးအကြီးဆုံးက ဆွဇ်မိတ် patek philippe ပါတိတ်ဖီးလစ်ပါ ဒေါ်လာသိန်းချီ တန်ပါသတဲ့။ ဘာလို့ အဲဒီလောက် ဈေးကြီးတာလဲဆိုတော့ အမျိုးအစားတစ်ခုကို သုံးခုလောက်ပဲ ထုတ်တယ်။ ဒီတော့ ဒီနာရီမျိုးဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ သုံးလုံးတည်း ရှိတယ် နာရီရဲ့Serial Number နဲ့ပိုင်ရှင်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသတဲ့။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဝတ်လဲဆိုတော့ မီလျံနာတွေတဲ့ ဝိုင်းရဲ့ ဘော့စ်နဲ့သူ့ ညီမတွေမှာရှိလို့သိတာပါတဲ့။ ဝိုင်းက လက်ကိုင်အိတ် ခရေဇီပါ။ Suit အမြဲဝတ်ရတဲ့ အီတလီကရုံးမှာ အစိမ်းရောင် ဝတ်ဝယ်ဆိုရင် ပုဝါ၊ Accessories ၊ အိတ်၊ ဖိနပ်ကအစ အားလုံးအစိမ်းရောင်တဲ့။ ကျွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တုန်းက Data Structure သင်တဲ့ တီချယ်ဒေါ်နေခြည်လဲ့လဲ့သိန်းကို ပြေးသတိရတယ်။ တီချယ်နေခြည်လည်း ခရမ်းရောင်ဝတ်တဲ့နေ့ ဆို အားလုံး ခရမ်းရောင်။
ဖက်ရှင်ကျတဲ့ အီတလီမှာ ၆ လနေလို့ မှ အိတ်မလဲရင် ဘယ်လိုပါလိမ့်လို့မျက်ခုံးပင့်ကြတယ်တဲ့။ ရုံးဝတ်စုံနဲ့အားကစားဖိနပ်စီးကြတဲ့ အမေရိကန်မှာတော့ ဖက်ရှင်ကျဖို့ ထက် သက်တောင့်သက်တာရှိဖို့အလေးထားတယ်။ သူ အိတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ဘယ်သူမှလည်း သတိထားမိမှာ မဟုတ်တော့ အယ်ဗွီ၊ ဆယ်ဗာတိုရီ ဖာရာဂမို အိတ်တွေဆိုတာ လက်ကေ့စ်ထဲကတောင် မထုတ်ရသေးဘူးတဲ့။ ကျွန်မက အိတ်ခရေဇီ မဟုတ်တော့ ဝိုင်းက ဘယ်အိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ ပြောပြလည်း လိုချင်စိတ် ဖြစ်မလားဘူး။ အယ်ဗွီအိတ်တွေဆိုတာ အတုလား၊ အစစ်လားမသိ လူတိုင်းကိုင်နေကြတာ၊ လမ်းဘေးမှာ ချရောင်းနေတာတွေ့ တာကိုး။ အယ်ဗွီနဲ့ပရာဒါအိတ်တွေက နာမည်ကြီးလို့အတုလုပ်ကြတာများတယ်။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေမှာ ရှိတာတော့ အစစ်ပါ။ တစ်နေ့ တော့ ဝိုင်းက နာမည်ကြီးဘရန်းတွေရှိတဲ့ စင်တာမှာ ကျွန်မကို အိတ်လက်ချာ ပေးပါတယ်။ Chanel ၊ Prada ၊ Louis Vuitton ၊ Salvatore Ferragamo ၊ Celine ၊ Valentino တို့ လို ဈေးကြီးတဲ့ ဘရန်းတွေကနေ Burberry၊ Tory Burch ၊ Ralph Lauren ၊ Marc Jacobs ၊ Kate Spade ၊ Coach ၊ Michael Kors တို့ လို အလတ်တန်းစားတံဆိပ်တွေ။ ချယ်နယ်၊ ပရာဒါ၊ အယ်လ်ဗွီထက် ဆယ်ဗာတိုရီဖာရာဂါမိုနဲ့စီလင်းတံဆိပ် အိတ်တွေကို ကြိုက်တယ်။ စီလင်းက ကျွန်မအတွက် ဈေးကြီးနေတယ် ဆယ်ဗာတိုရီဖာရာဂါမို အိတ်တစ်အိတ်ကိုတော့ မျက်စိကျသွားတယ် ဝယ်ဦးမယ်။ အဲဒါတွေ ကြည့်ပြီးတော့ တခြားတံဆိပ်တွေက မျက်စိထဲ ရောက်မလာတော့ဘူး။ ဝိုင်းက အဲဒါကြောင့်ပြောတာ upgrade ပြီးရင် downgrade ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ ။
ဝိုင်းရေ ငါလည်း နင်နဲ့ ပေါင်းတော့မှ အိတ်တွေအကြောင်း၊ နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေ အကြောင်း သိတော့တယ်။ ငါလည်း နင်နဲ့ပေါင်းတော့မှ Canon 7D Mark II ၊ 5D Mark II ၊ Wide Angle Lens ၊ Standard Lens ၊ Teleno Lens ၊ Fish Eye Lens ၊ Shift Lens အကြောင်း သိတော့တယ်။ အေး ငါ့အစ်မနဲ့ ပေါင်းရင် ကယ်လီအောစဗွန်း လစ်မစ်တက် အက်ဒီရှင်း နှုတ်ခမ်းနီ၊ ဘာမိတ်ကပ်၊ ညာဖက်ရှင်ဆိုတာ သိလာလိမ့်မယ်။ ကျွန်မ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ရေမွှေးက CK Escape ပါ။ စင်္ကာပူမှာကတည်းက သုံးလာတာ ယူအက်စ်မှာလည်း သုံးနေတာ လေးနှစ်ရှိပြီ ကျွန်မကပဲ ဆွှတ်တာနည်းတာလားတော့ မသိ ခုထိ တဝက်ပဲ ကုန်သေးတယ်။ မေရီလန်းနဲ့ကက်တန်ကီအိမ်ရှင်တွေက ကျွန်မရေမွှေးနံ့ ကို ကြိုက်လို့ တဲ့။ အမေရိကန်တွေ Good Great ဆိုတာ တကယ်ဂွတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အမေရိကန်တွေက အားလုံးကို ဂွတ်၊ ဂရိတ်လို့ပြောတတ်တာကိုး။ အဲဒီရေမွှေးကုန်ရင်တော့ ချန်နယ်နံပါတ် ၇ ဝယ်ဦးမယ်ဆိုတော့ ဝိုင်းက ချန်နယ်နံပါတ် ၇ ၊ မကြားဖူးပါဘူး အသစ်ထွက်တာများလား။ ဟာ..ဒီလောက် နာမည်ကြီးတာ မသိဘူးလား ချန်နယ်ရဲ့သင်္ကေတလေ။ ချယ်နယ်နံပါတ် ၅ ကို ပြောတာလား အင်း ဟုတ်တယ် အောင်မလေး လူတိုင်းသိတဲ့ဟာကို မသိဘူးလား။ လူပဲဟ များတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့ ငါ့အစ်မ သုံးဖူးတယ် ကြိုက်တယ်တဲ့။ မေစီစတိုးမှာ ရေမွှေးတွေ လိုက်ဆွှတ်ကြတော့ ဝိုင်းရေ ချယ်နယ်နံပါတ် ၇ သွားဆွှတ်ရအောင် ဟား..ဟား..ချယ်နယ်နံပါတ်ဖိုက်ပါကွ။ Gucci ကို ဂူစီလို့အသံထွက်တော့ ဂူချီလို့အသံထွက်ရတယ်တဲ့။ ကြည့် ကျွန်မက upscale elite မဟုတ်တဲ့ သာမာန်လက်လုပ်လက်စားဆိုတာ သိသာလိုက်တာ။
ခရစ်စမတ်နေ့ မှာ Fifth Avenue အမှတ်ငါးလမ်းမကြီးတလျှောက်က ဆိုင်တွေအားလုံး ပိတ်ပေမဲ့လည်း လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်နေတာပဲ။ ရော့ခါဖယ်လာခရစ်စမတ်သစ်ပင်နားဆို အမြဲတမ်း လူတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေတာပဲ။ လမ်းဘေးမှာ ချရောင်းတဲ့ အယ်ဗွီအိတ်တွေမြင်တော့ ဝိုင်းက သူတို့ ဗီယက်နမ်မှာ အိတ်အတုနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ရှိပါတယ်တဲ့။ တစ်ခါတုန်းက နာမည်ကြီးသူဋ္ဌေးမိန်းမ အီတလီကိုလာတော့ လေဆိပ်မှာ အိတ်အတု တင်သွင်းမူနဲ့ကာစတန်က ဖမ်းတယ်။ ဟင်...ကာစတန်က အိတ်အတုမှန်း ဘယ်လို သိတာတုန်း တချို့ အိတ်တွေဆို အစစ်နဲ့လုံးဝမခွဲနိုင်ဘူး။ ငါလည်း သေချာမသိဘူး ကာစတန်က အဲဒါတွေ လေ့ကျင့်ထားတယ် ထင်တယ်။ ဥရောပမှာ ဥပဒေရှိတယ် အတုတင်သွင်းခွင့် မရှိဘူး။ အဲဒီသူဋ္ဌေးမအိတ်က အတုလား။ မဟုတ်ဘူး ဟနွိုင်းမြို့ လယ်ခေါင်က အယ်ဗွီတရားဝင်ဆိုင်မှာ ဝယ်တာ။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က အတုနဲ့ လဲထားတာ။ နောက်တော့ အဲဒီအယ်ဗွီဆိုင်က တရားဝင် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီး တောင်းပန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားကြည့်စမ်း ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့အတုကိုင်တာလည်းမဟုတ် တရားဝင်ဆိုင်မှာ ကျသင့်ငွေပေးပြီး ဝယ်ထားတာ လေဆိပ်မှာ အဖမ်းခံရတယ်တဲ့ ဘယ်လောက် humiliate ဖြစ်သလဲ။ ဒီတော့ တတ်နိုင်ရင် အစစ်သာကိုင်။ ဝိုင်းအစ်မကတော့ အိတ်တွေ လိုချင်ရင် အီတလီကိုသာ မှာတယ်တဲ့ ဥရောပဖက်က ကွာလတီ ပိုကောင်းတယ်။ ငါတို့ စင်္ကာပူရုံးက website ကိုလေ တရုတ်ပြည်က ကူးချတာ ဒါရိုက်တာတွေဆိုတာ စိတ်ဆိုးလို့တရားစွဲမယ် ဖြစ်ရော။ စင်္ကာပူမှာဆို ကော်ပီခွင့်နဲ့တရားစွဲလို့ရပေမဲ့ တရုတ်ပြည်ဆိုတော့ တရားစွဲလို့မရ။ နောက်တော့ ငါတို့ ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလိုက်ရတယ်။
ခရစ်မမတ်၊ နှစ်သစ်ကူးဆိုရင် ဖေ့ဘွတ်မှာ ချစ်ချစ်အတွက် စလင်းဘတ်၊ ချစ်ချစ်ဆီက စလင်းဘတ်ဆိုတာတွေ တွေ့ ရင် အားကျလိုက်တာ။ ကိုယ်တွေမှာတော့ စလင်းဘတ် ပေးမဲ့လူလည်းမရှိ။ ပေးမဲ့လူမရှိလည်း အားမငယ်ပါဘူး ကိုယ့်ဘာသာ ဝယ်နိုင်တာပဲနော့။ ဒီတော့ Birthday present to me ၊ New Year present to me ဆိုတော့ ဝိုင်းကပါ to me နေရာရောက်ရင် သံပြိုင်ဟစ်လို့ကိုယ့်ဘာသာ reward လုပ်ကြတယ်။ ဝိုင်းက သူ့ ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ပုတ်ပြီး I me myself ငါ ငါ့အတွက် ငါ့ဟာ ငါရှာတာ ငါသုံးဖို့လို့ ဆိုတော့ ဘာမှရယ်စရာမပါပေမဲ့လည်း ကျွန်မတို့ မှာ ရယ်မောရသေးတယ်။ ကျွန်မအဖေက သမီးရေ ခရီးတွေ သိပ်မသွားနဲ့ပိုက်ဆံသိပ်မသုံးနဲ့ ပိုက်ဆံစုလို့ ပြောရင် သမီးအလိမ္မာလေး ကျွန်မက အဖေရေ သမီး ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်နေတာ ဘာအတွက်လဲ၊ ခရီးသွားလို့ မှ အပန်းမဖြေရင် အလုပ်လုပ်တာ ဘာအဓိပ္ဗာယ်ရှိတော့မှာလဲ။ သမီးတော့ ခရီးမသွားဘဲ၊ စားသောက်ဆိုင်မှာ သွားမစားဘဲ၊ လျှော့ပင်းမထွက်ဘဲ ပိုက်ဆံကို ခြစ်ကုတ်ပြီး စုမနေနိုင်ဘူး။ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်တုန်းက ကျန်းမာတယ် အချိန်ရှိတယ် ပိုက်ဆံမရှိဘူး။ ပင်စင်စားဆိုရင် အချိန်ရှိတယ် ပိုက်ဆံရှိဦးတော့ မကျန်းမာပြန်ဘူးး။ ကျန်းလည်းမာ အချိန်လည်းရှိ ပိုက်ဆံလည်း အဆင်ပြေတဲ့ ခုချိန်ဟာ ခရီးသွားဖို့အကောင်းဆုံး။ ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေး ကိုယ် ဝါသနာပါတဲ့၊ နှစ်သက်တဲ့၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်ရင် ဘဝဆိုတာ ဘယ်နေပျော်စရာ ကောင်းတော့မလဲ။ မချစ်ကြည်အေးဘလော့မှာ ဖတ်လိုက်ဖူးတယ် လူဘဝကြီးဟာ ယားနာကုတ်နေသလိုပဲတဲ့။ ယားလာရင် ကိုရီးယားကားလေးကြည့်လိုက်၊ ကာရာအိုကေဆိုင်လေးမှာ ဟဲလိုက်၊ စပါသွားလိုက်၊ လျော့ပင်းထွက်လိုက်၊ စားသောက်ဆိုင်သွားစားလိုက်၊ စာရေးသီချင်းဆိုလိုက်၊ ခရီးတွေသွားလိုက်၊ ဖေ့ဘွတ်၊ အီစတာဂရမ်မှာ ဓာတ်ပုံတင်လိုက်ကြနဲ့ ။ ကျွန်မလည်း ဘာထူးလဲ ခရီးသွားတဲ့ ဆေးမြီတိုနဲ့ယားနာလေး ကုလိုက်ဦးမယ်နော့။
ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄။
မနက် ၇ နာရီခွဲ မောနင်းဖုန်းကောခေါ်ပြီး နှိုးတာနဲ့အိပ်ယာထ ရေမိုးချိုး၊ အထုပ်ပြင်၊ ပါလာတဲ့ ဘီစကွတ်တွေနဲ့မနက်စာစားကြတယ်။ ဟိုတယ်က မနက်စာကို အခမဲ့ကျွှေးတာ မဟုတ်ပါဘူး သွားစားရင် ငါးကျပ်ပေးရမယ်။ ကောင်တာမှာ အခန်းသော့အပ်ပြီး တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်ပြောတဲ့ လမ်းလျှောက်ဝါသနာပါသူတွေ မြစ်ဘေးနားက လမ်းကလေးမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ ညွှန်းတဲ့ မြစ်ကမ်းဘေးကို လမ်းလျှောက်ဖို့ကြည့်လိုက်တော့ လား...လား ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီး၊ ရထားလမ်းတွေကို ကျော်ပြီးမှ မြစ်ကမ်းဘေးကို ရောက်မှာပါလား။ မြူတွေ ခြုံသိုင်းနေတဲ့ မြစ်ကမ်းဘေးက လမ်းကလေးက လမ်းလျှောက်ဖို့အင်မတန် ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမြစ်ကမ်းဘေးဆီ ဘယ်လိုသွားရပါ့မလဲ။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမကို ဟိုရှေ့ က မီးပွိုင့်ကနေ ဖြတ်လို့ တော့ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့ ရထားလမ်းကို ဖြတ်ရမှာ ကြောက်စရာကြီး။ လာ ဟိုးနားက Kmart ကို သွားလျှော့ပင်းရအောင်။ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်ရဲ့ ဖုန်းက အိုင်ဖုန်း၆ပလပ်နဲ့လားလားမှ မတူတဲ့ဖုန်း။ ဖုန်းက အိုင်ပတ်မီနီနီးပါးလောက် ရှိတယ်။ သူ့ ဖုန်းက အသစ်မို့ လို့အထွက်ကောမရဘဲ အဝင်ကောပဲ လက်ခံတယ်တဲ့။ ဘာဖုန်းလဲလို့စပ်စုကြည့်တော့ နိုကီရာက အသစ်ထွက်တဲ့ ဖုန်းပါတဲ့။
ဝိုင်းက အဲဒီဖုန်းကို ကြိုက်လို့ တဲ့။ ကျွန်မကတော့ ပစ်ပေါက်ရင် သေလောက်တဲ့ ဖုန်းဆိုပြီး မကြိုက်ဘူး။ ခါတိုင်းခရီးစဉ်တွေမှာ တိုးဂိုက်က တစ်ယောက်တည်း ဒီခရီးစဉ်မှာ တိုးဂိုက်က နှစ်ယောက်တောင်။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ကို ထရိန်းတာလဲ မသိဘူး။ ငါ ထင်တာတော့ ရေဗင်က အက်ဒီဆင်ကို ထရိန်းနေတာ ထင်တယ်။ ဟုတ်ပါ့မလား ရေဗင်က ငယ်ပုံပေါက်တယ်နော် ရေဗင်က အက်ဒီဆင်ကို ထရိန်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။ ငါတော့ မထင်ပါဘူး ရေဗင်က ပုလို့နုနေတာ ရေဗင်ကပဲ ညွှန်ကြားနေတာ တွေ့ ပါလား။ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်ကို ဘာလို့ တိုးဂိုက်နှစ်ယောက် ဖြစ်နေတာလဲ မေးမြန်းကြည့်တော့ သူ့ ဖုန်းက ပြသနာဖြစ်နေလို့တိုးဂိုက်တစ်ယောက် ထည့်ပေးပါလို့ကုမ္ဗဏီကို တောင်းတာတဲ့။ ဒီတိုးကုမ္ဗဏီမှာလုပ်တာ ၆ လလောက်ရှိပြီ။ နိုင်အာဂရာနဲ့ဘော့စတွန်တိုးတွေကို လိုက်ပါသတဲ့။ သူတို့ တိုးကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်သမား စုစုပေါင်း ၄၀၀ လောက် ရှိပါသတဲ့။ မက်ဟန်တန်ကနေ ၂ နာရီအဝေး နယူးဂျာဆီပြည်နယ်ရဲ့ဂတ်စ်စတေးရှင်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ၁၅ မိနစ်နားတော့ တိုးဂိုက်ဂျယ်ရီနဲ့ဆုံသေးတယ်။ တိုးဂိုက်ဂျယ်ရီက ကျွန်မတို့ ကို မှတ်မိနေတယ် လက်ပြနှုတ်ဆက်တယ်။ တိုးဂိုက်ဂျယ်ရီက အက်ကေဒီးယား၊ ဗာမွန်သွားတောလားတွေရဲ့တိုးဂိုက်ပါ။ ဒုတိယနေ့ မှာ ပထမဆုံး သွားရောက်လည်ပတ်မှာက Penn's cave ပါ။
ကားမောင်းနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ဆန့် ကျင်ဖက်ကို ပြန်မောင်းတော့ ဘာများဖြစ်သလဲပေါ့။ နောက်တော့ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်က ပန်လှိုဏ်ဂူကို သွားမဲ့လမ်းမှာ ယဉ်ကြောကျပ်နေတာ တစ်နာရီလောက် စောင့်ရမှာမို့အချိန်မကုန်ချင်လို့ပန်လှိုဏ်ဂူအစား ဟာရှီချောကလက်စက်ရုံကို သွားကြမယ်တဲ့။ မစ္စတာဟာရှီက နို့ ၊ သကြား၊ ကိုကိုးတို့ နဲ့ အရသာကောင်းမွန်တဲ့ ချောကလက်ကို တီထွင်ခဲ့လို့ဟာရှီချောကလက်လို့အမည်တွင်တာပါ။ မစ္စတာဟာရှီကနေ ဟာရှီအထက်တန်းကျောင်း၊ ဆေးရုံတို့ ကုို ဆောက်လုပ်လှုဒါန်းခဲ့လို့မြို့ ကိုလည်း ဟာရှီမြို့ လို့အမည်ပေးခဲ့တာပါ။ အတွင်းမှာ လှည့်လည်နေတဲ့ ရထားလေးစီးပြီး ချောကလက် ထုတ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာကြတယ်။ ရထားတွဲကိုစီးပြီး ချောကလက်စက်ရုံထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ဟာရှီမစ် ချောကလက် ဒန်...ဒန်...ဒန် လို့မြူးကြွတဲ့ သီချင်းသံတွေနဲ့နွားလေးတွေက အမြီးလှုပ်၊ ခေါင်းလှုပ်ကာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့ က ကိုကိုးစေ့တွေ စက်ရုံကို ရောက်လာတော့ အရည်အသွေး ပြည့်မှီတဲ့ ကိုကိုးတွေကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သန့် စင်၊ နို့ ၊ သကြားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ကာ ချောကလက် ထုတ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရထားတွဲမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ narrator က ရှင်းပြသွားတာ ပျင်းစရာမကောင်းဘဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ Hmmm..smell is so good လို့ကြားလိုက်ရရင်ပဲ ချောကလက်ဝေဖာမုန့် အနံ့ ရလို့စားချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာတယ်။ ခန်းမထဲကနေ ထွက်တော့ ချောကလက်သေးလေးတွေ ပေးတယ်။ သဘောကျလို့နှစ်ခေါက်တောင် ပြန်စီးကြတယ်။
ချောကလက်တွေက ဈေးကွက်မှာထက် သက်သာပါတယ်။ ဘလက်ချောကလက် ၃ ထုပ် ဝယ်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ချောကလက်ကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ 3D ရုပ်ရှင် ရှိပေမဲ့ အခမဲ့မဟုတ်တော့ မဝင်တော့ဘူး။ ဟာရှီ Amusement Park ထဲမှာ ရိုလာကိုစတာတွေ့ ပေမဲ့ အချိန်မရှိတော့လို့မဝင်တော့ပါဘူး။ ထရောလီကားတွေ ပြေးဆွဲပေးနေတာ တွေ့ တယ်။ ဝိုင်းလို ချောက်ကလက် မကြိုက်တဲ့သူကလွဲလို့ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေ အကုန်လုံးနီးပါး ဟာရှီချောကလက် ဝယ်ကြပါတယ် ဈေးသက်သာတာကိုး။ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်က သူဝယ်လာတဲ့ Kiss ချောကလက်တွေကို တစ်ယောက်နှစ်ခု ဝေပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ Kiss ဆိုတာ ချစ်သူတွေတင် မဟုတ်ဘဲ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေ ဆုံကြရင် ကစ်ပါသတဲ့။ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်က အင်္ဂလိပ်စကားပြောအသံထွက် မကောင်းပေမဲ့ ကြိုးစားပမ်းစား၊ စိတ်ပါလက်ပါ ရှင်းပြနေတာကို ခံစားမိတော့ အားလုံးက ကွန်ပလိမ်း မတက်သလို ဖော်ရွေသဘောကောင်းတဲ့ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်ကို ခရီးသည်တွေက ခင်မင်ကြတယ်။ တိုးဂိုက်ရေဗင်ရဲ့အသံက ဖော်ဖော်ရွေရွေမရှိတဲ့အပြင် ခပ်တည်တည် နေလေ့ရှိတယ်။ ခရီးသည်တွေကို အဝမှာ စောင့်နေတာမျိုး၊ အချိန်စေ့လို့ မှ မရောက်လာရင် လိုက်ရှာတာတွေတော့ လုပ်တယ်။ ခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံး သွားရောက်လည်ပတ်ရမဲ့ နေရာကတော့ ပန်လှိုဏ်ဂူပါ။ ဟာရှီချောကလက်စက်ရုံကနေ မိုင် ၉၀၊ ၁ နာရီခွဲသာသာ ဝေးပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလရဲ့နောက်ဆုံးပတ် ကြသပတေးနေ့ မှာ ကျရောက်တဲ့ ကျေးဇူးတော်နေ့ ၊ ဘလက်ဖရိုင်းဒေး၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် လေးရက်တောင် ရတာမို့အမေရိကန်မှာ ခရီးသွားကြတဲ့ အချိန်ဆိုပါတော့။ ယူအန်ရုံးက ဘလက်ဖရိုင်းဒေး မပိတ်သလို အလုပ်များနေလို့ခွင့်မယူချင်တဲ့ ဝိုင်းကြောင့် နှစ်ရက်ခရီးစဉ်တွေ ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ ခရစ်စမတ်အထူးအစီအစဉ် တစ်ညအိပ်နှစ်ရက်ခရီးစဉ် သုံးခုကို သွားတွေ့ ပါတယ်။ ယေးတက္ကသိုလ်၊ Yankee Candle Village ရှိတဲ့ ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်ဖက်၊ Longwood Gardens ရှိတဲ့ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ဖက်၊ ရေခဲပန်းပုပြပွဲရှိတဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီပြည်နယ်ဖက်ကို သွားတဲ့ခရီးစဉ် သုံးခုထဲမှာ ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ခရီးမသွားခင် တစ်ပတ်အလိုမှာ ကွင်ဖန်း confirm ဖြစ်မဖြစ် စုံစမ်းကြည့်တော့ လုံလောက်တဲ့ဘွတ်ကင်း အရေအတွက်မရလို့ခရီးစဉ်မဖြစ်မြောက်ဘူးတဲ့။ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားခရီးစဉ်က ကွင်ဖန်းဖြစ်မှာမို့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားခရီးစဉ်ကို ပြောင်းလိုက်တာမို့ကွန်နက်တီကပ်သွား တောလား အစား ပန်ဆယ်ဗးနီးယားသွား တောလား ဖြစ်သွားပါတယ်။
စုရပ်ကို သတ်မှတ်ထားချိန်ရောက်ဖို့ ၊ ရာသီဥတု အေးရင် အနွေးထည်တွေ ယူခဲ့ဖို့ ၊ လိုအပ်တာတွေ မှာကြားတဲ့ မတ်ဆေ့တွေကို ခရီးသွားမဲ့နေ့မတိုင်ခင် အကြိုနေ့ ညမှာ တိုးဂိုက်ဆီက ရလေ့ရှိပါတယ်။ တိုးဂိုက်ဆီက မတ်ဆေ့ရတော့ ဟယ်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ် မနက် ၈ ၄၅ စုရပ်ကို ရောက်အောင်လာဖို့ တဲ့။ ဘုရားရေ...တိုးက ၈ နာရီ ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူးလား အချိန်ပြောင်းလိုက်တာလား ဖုန်းခေါ်မှပါပဲ။ ဖုန်းခေါ်တော့ လိုင်းမအားဘူး တူ...တူ မြည်နေတယ် ကျွန်မလို ဟယ်ခနဲ ဖြစ်သွားသူတွေ တိုးဂိုက်ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး သေချာအောင် မေးမြန်းနေကြတယ်နဲ့တူတယ်။ တိုးဂိုက်က ဖုန်းပြန်ခေါ်ပါတယ် အချိန်မှားသွားလို့ တဲ့ မနက် ၆ နာရီ ၄၅ စုရပ်ဖလပ်ရှင်းကို ရောက်အောင်လာပါတဲ့။ မကြာပါဘူး နောက်တိုးဂိုက်တစ်ယောက် ဖုန်းဆက်လာပြန်တယ်။ မနက် ၆ နာရီ ၄၅ စုရပ်ဖလပ်ရှင်းကို ရောက်အောင်လာဖို့ ။ တိုးဂို်က်ဆီက မတ်ဆေ့ကို ဝိုင်းဆီပို့ တော့ သူလည်း ဟယ်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူပါရဲ့ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်တယ်။ ဝိုင်းရေ အဲဒီလို အဲဒီလို အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ကိုမှ မှားရတယ်တဲ့။ အင်း ...ဒီလိုမျိုး မတိကျတဲ့ တိုးဂိုက်တွေနဲ့အချိန်တိကျတဲ့ ဝိုင်းနဲ့တွေ့ ကြဦးမယ်ထင်ပါ့။
မနက် ၅ နာရီခွဲ အိပ်ယာက၊ ရေချိုး၊ အထုပ်ပြင်နေတာ ၆ နာရီ ၁၅ ဖြစ်သွားလို့ဘူတာဆီ အသည်းအသန် ပြေးရတာနဲ့ရေနွေးဓာတ်ဘူးနဲ့ဖုန်းအားသွင်းကြိုး မေ့ကျန်ခဲ့တယ်။ ဖလပ်ရှင်းကနေ ၇ နာရီမှာ ထွက်တဲ့ ကြိုပို့ ဖယ်ရီကိုစီး တရုတ်တန်းရောက်တော့ မနက် ၇ နာရီခွဲ။ ကျေးဇူးတော်နေ့ ပိတ်ရက်မှာ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ နိုင်အာဂရာ၊ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယား နေ့ ချင်းပြန် ခရီးစဉ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဝိုင်းရောက်လာတော့ တိုးဂိုက်ဆီမှာ ချက်ကင်ဝင်တော့ မှားနေလားမသိဘူး စစ်လိုက်ဦးမယ်နဲ့ခုံနံပါတ်မရဘူး။ နောက်တော့ တခြားအဖွဲ့ နဲ့မှားနေလို့ဆောရီးနော်ဆိုပြီး ဒုတိယတန်းခုံရတယ်။ ဒီခရီးက သွားဖူးသမျှခရီးထဲမှာ အချိန်အတိအကျ ထွက်တဲ့ ခရီးဖြစ်သလို ခရီးသည်အပြည့် မပါဘူး။ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်က နယူးယောက်ပြည်နယ်အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ နယူးယောက်ပြည်နယ်ဟာ ဘရောင်း Bronx ၊ မက်ဟန်တန် Manhattan ၊ ကွင်း Queens ၊ ဘရွှတ်ကလင်း Brooklyn ၊ ကနေဒါနဲ့ရေကန်ကြီးတွေ ခြားထားသလို ဗာမွန်ပြည်နယ်နဲ့ လည်း၊ ချန်ပိန်ရေကန် ခြားထားပြန်တဲ့ နယူးယောက်ပြည်နယ် အတွင်းပိုင်းဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ နယူးယောက်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ တော်က အလ်ဘနေ Albany ဖြစ်ပေမဲ့ နယူးယောက်စီးတီး NYC (New York City) က အကြီးဆုံးပါ။
မက်ဟန်တန်နဲ့ဘရွှတ်ကလင်းကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ တံတားသုံးစင်း ရှိပါတယ်။ အတိုကောက် BMW လို့မှတ်ထားပါတဲ့။ B က ဘရွှတ်ကလင်းတံတား၊ M က မက်ဟန်တန်တံတား၊ W က ဝီလီယံဘာ့ခ်တံတား Williamsburg တံတားပါ။ မက်ဟန်တန်ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်း ၃ ခုရှိရာမှာ နယူးဂျာဆီပြည်နယ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဟော်လန်တန်နယ်၊ လင်ကွန်းတန်နယ်၊ ကွင်းဖက်ကို ကွင်းမစ်တောင်းတန်နယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ အရင်တုန်းက မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းဖောက်ရင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိဘူး။ နောက်တော့ လှိုဏ်ခေါင်းနားမှာ အဆောက်အဦးတစ်ခုဆောက်ပြီး ပန်ကာအကြီးကြီးတွေ တပ်ဆင်ကာ မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းထဲ လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေတဲ့ နည်းလမ်းကို တွေ့ သွားတယ်တဲ့။ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရှင်းပြတော့မှ မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်း တဖက်တချက်ဆီက လေရဟတ်ရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို သတိထားမိတော့တယ်။ နယူးယောက်ဆိုတာနဲ့လစ်ဘာတီရုပ်တုကို ပြေးမြင်ကြပေမဲ့ လစ်ဘာတီရုပ်တုက နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟော်လန်တန်နယ်ထဲက ထွက်ရင်ပဲ Welcome to New Jersey ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်ရတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ဘာတွေ့ သလဲ...(ကလေးများ) လစ်ဘာတီရုပ် ။ မှန်ပါတယ် လစ်ဘာတီရုပ်တုက နယူးဂျာဆီပြည်နယ်မှာ ရှိတာကွဲ့ ။
လစ်ဘာတီရုပ်တုကို လှမ်းကြည့်လိုက် နယူးဂျာဆီဖက်မှာ ရှိတာလား၊ နယူးယောက်ဖက်မှာ ရှိတာလား။ (ကလေးများ) နယူးဂျာဆီဖက်မှာ။ နယူးဂျာဆီပြည်နယ်က အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အသေးဆုံးပြည်နယ်ထဲမှာ ပါတယ်။ နယူးဂျာဆီရဲ့ထူးခြားချက်က ဓာတ်ဆီဈေး သက်သာတယ်။ နယူးယောက်သားတွေ နယူးဂျာဆီမှာ ဓာတ်ဆီလာဖြည့်ရင်း လျော့ပင်းကြတယ်။ နယူးယောက်နဲ့ယှဉ်ရင် သက်သာတာကိုး။ နယူးယောက်က အကုန်ဈေးကြီးတယ် အိမ်ဈေးတွေလည်း ခေါင်ခိုက်နေတယ်။ ကျောင်းသားဗီဇာနဲ့အင်တန်းရှစ်ဆင်းနေတုန်းက ဖယ်ဒရယ်၊ စတိတ်တက်စ်တွေပဲ ဆောင်ရပေမဲ့ ခုတော့ အလုပ်ဗီဇာဖြစ်သွားပြီမို့Social Security (ပင်စင်)၊ မက်ဒီကယ် Medicare တက်စ်တွေအပြင် နယူးယောက်မှာနေတာမို့နယူးယောက်စီးတီးတက်စ်၊ မသန်မစွမ်းတက်စ်တွေ ဆောင်ရတယ်။ နယူးဂျာဆီမှာနေရင် နယူယောက်စီးတီးတက်စ်၊ မသန်မစွမ်းတက်စ်တွေ ဆောင်စရာ မလိုဘူး။ ကားပါးကင်၊ ကားအာမခံတွေလည်း နယူးယောက်မှာ ပိုဈေးကြီးတယ်။ တိုးဂိုက်က အင်္ဂလိပ်စကားအသံထွက် မကောင်းပေမဲ့ ကြိုးစားပမ်းစား ရှင်းပြပါတယ်။ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်က တိုးဂိုက်ရေဘင်ကို သူ့ ပါတနာ Partner လို့မိတ်ဆက်ပေးတော့ ကျွန်မနဲ့ ဝိုင်း ရယ်ချင်တာကို မထိန်းနိုင်လို့စာရွက်နဲ့ ကွယ်ပြီး ရယ်ကြတယ်။
Colleague ၊ Team member ၊ Friend စကားလုံးတွေ အများကြီး ရှိရဲ့ သားနဲ့ဒီစကားလုံးကိုမှ ရွေးရတယ်လို့ ။ ကြည့်ရတာ အမေရိကန် အသုံးအနှုန်းကို သိပုံမရဘူး သတိပေးမှပါပဲ။ အင်း လူရှင်းတဲ့အချိန် တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတိပေးရအောင်။ ပထမဆုံး သွားရောက်မဲ့နေရာက မက်ဟန်တန်ကနေ မိုင် ၁၁၀၊ ၂ နာရီအဝေးမှာရှိတဲ့ နယူးဂျာဆီပြည်နယ် ကန်ဒမ်မြို့ မှာရှိတဲ့ အက်ဗန်းရှားရေသတ္တဝါပြတိုက် Adventure Aquarium ပါ။ နိုင်အာဂရာသွားတောလားတုန်းက ဒစ်ကာဗာရေသတ္တဝါပြတိုက်၊ အက်ကေဒီယားသွားတောလားတုန်းက ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ် မစ်စတစ်မြို့ က မစ်စတစ်ရေသတ္တဝါပြတိုက်တွေကို လည်ပတ်ပြီးပြီမို့ရေသတ္တဝါပြတိုက်တွေကို လည်ပတ်ဖို့ဆန္ဒမရှိတော့လို့မလည်တော့ဘူးလို့တွေးနေကြတယ်။ မနက်အစောကြီး ထပြီးလာရတာမို့အိပ်ချင်နေကြမှန်း သိတယ် အိပ်ကြမလား သီချင်းနားထောင်ကြမလား။ ကားပေါ်မှာ ပါတဲ့ ကလေးငါးယောက်က သီချင်းနားထောင်မယ်လို့သံပြိုင်အော်ကြတယ်။ တိုးဂိုက်အက်ဒီဆင်က သူ့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေ ဖွင့်တယ်။ Westlife ၊ Nsync သီချင်းတွေဆိုတော့ ကျွန်မအကြိုက်ပေါ့။ ဗွီဒီယိုကာဗာက ခုသွားလည်ပတ်မဲ့ နေရာတွေက ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ရေသတ္တဝါပြတိုက်က ဓာတ်ပုံလှလှတွေမြင်တော့ ရေသတ္တဝါပြတိုက်ကို ဝင်လည်မယ် ဖြစ်သွားတယ်။ ရေသတ္တဝါပြတိုက် အများစုက မြို့ ရဲ့ အဝေးမှာ ရှိနေတတ်တော့ ဝင်မလည်ရင် ပေးထားတဲ့အချိန်ကို ဘာမှာ သွားဖြုန်းရမှန်း မသိဘူး။
အိန္ဒိယနွှယ်ဖွား ၈ ယောက် အုပ်စုက ရေသတ္တဝါပြတိုက်မှာမှ လာဆုံတော့ ကားမှာ လူပြည့်သွားတယ်။ အက်ဗန်ရှားရေသတ္တဝါပြတိုက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေမြင်းရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရေသတ္တဝါပြတိုက် ဖြစ်သလို အမေရိကန်မှာ တူသဏ္ဌန် နှုတ်သီးရှိတဲ့ ငါးမန်းတွေရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ရေသတ္တဝါပြတိုက် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးဂိုက်က အချိန်နှစ်နာရီ ပေးပြီး နေ့ လည်စာကို ရေသတ္တဝါပြတိုက်က စားသောက်ဆောင်မှာ စားခဲ့ဖို့မှာကြားပါတယ်။ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ ဇုန် လေးခုရှိပါတယ်။ မိကျောင်း၊ ငါးတွေ ပြထားတာကတော့ တခြားရေသတ္တဝါပြတိုက်နဲ့အတူတူပါပဲ။ ကျွန်မ ကင်မရာက အော်တိုဖလပ်ရ်ှထွက်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိတော့ ဓာတ်ပုံတွေ မကောင်းဘူး။ အိုင်ဖုန်းကင်မရာက ပိုကောင်းနေတယ်။ အာဖရိကပင်ကွင်းတဲ့ ပင်ကွင်းလေးတွေက ချစ်စရာလေး။ ငါးလိပ်ကျောက်၊ မြွေနဲ့ တူတဲ့ငါး၊ ငါးမန်းလေးတွေကို ကိုင်ကြည့်လို့ ရတော့ ကလေးတွေ ပျော်ကြတာပေါ့။ ခန်းမတစ်ခုမှာ လူတွေအပြည့်ဆိုတော့ ဘာများလဲပေါ့။ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ အဘွားကြီးက ခရစ်စမတ်မှာ ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားသင့်သလဲ မေးတော့ ဖြေဖို့ကလေးတွေ အများကြီး လက်ထောင်ကြတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ကို ရှေ့ ထွက်ခုိုင်းပြီး ဖြေခိုင်းတော့ ကလေးမလေးက ခရစ်စမတ်မှာ တခြားသူတွေကို ကူညီရမယ်၊ စိတ်ကောင်းထားရမယ်တဲ့။ သူ ကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတဲ့ ကွတ်ကီးတွေကို ပွဲပြီးရင် လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးပါမယ်။ မျက်စိမှတ်ပြီး ဆုတစ်ခုတောင်းပါတဲ့ မျက်စိဖွင့်ခိုင်းလိုက်တော့ ရေကန်ထဲမှာ ကူးခတ်နေတဲ့ စကူပါဆန်တာကို တွေ့ လိုက်ရတော့ ကလေးတွေဆိုတာ Santa, I love you. လို့အော်တဲ့သူအော်နဲ့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့။ စကူပါဆန်တာ Scuba Santa ဆီကို ပေးပို့ နုိုင်တဲ့ အမြန်စာပို့ ပုံး Express Mail နားမှာ ကလေးတွေ ဆန်တာဆီ စာရေးနေကြတယ်။ ရေမြင်းပြခန်း ဝင်ရင်ပဲ အနံ့ အသက်က ဆိုးတယ်။ ရေထဲစိမ်နေကြတဲ့ ရေမြင်းနား ငါးကလေးတွေ ကူးခတ်နေကြတယ်။ အဲဒီငါးတွေက ရေမြင်းကိုယ်ပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို လာစားတာတဲ့။ ရေမြင်းတွေဟာ ပင်လယ်ဖျံ Sea lion ၊ Dolphin တို့ လို ယဉ်ပါးလွယ်တဲ့ သတ္တဝါမျိုး မဟုတ်တော့ သင်ကြားရတာ ခက်ပါတယ်။ မျိုးတုန်းတော့မဲ့ စာရင်းဝင်နေပါတယ်။
တခြားရေသတ္တဝါပြတိုက်တွေနဲ့မတူတာက ငါးမန်းကန်အောက် လှိုဏ်ခေါင်းကနေ ကူးခတ်သွားလာနေတဲ့ ငါးမန်းတွေကို ၃၆၀ ဒီဂရီ လည့်ပတ်ကြည့်လို့ရတာပါ။ တရုတ်ပြည်မှာ ငါးမန်းတောင်ဟင်းချိုက နာမည်ကြီးတယ်။ တချို့ ဆို ငါးမန်းအတောင်ကိုပဲ ဖြတ်ယူကြတယ်။ ငါးမန်းတွေလည်း မျိုးတုန်းတော့မဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါတယ်။ ငါးမန်းတောင်ဟင်းချို တခါမှ မစားဖူးဘူး။ ရှူး...တိုးတိုး...ငါးမန်းတောင်ဟင်းချိုအကြောင်း တွေးနေတဲ့ တရုတ်ငတိမလေးတွေလို့ထင်သွားဦးမယ်။ 3D Movie Theatre ရှိပေမဲ့ ဝင်မကြည့်တော့ဘူး။ kids zone ဆိုတာပဲ ကျန်တော့မယ် ဝင်ကြည့်ရအောင်။ ဝိုင်းရေ ဒီဖားလောင်းကနေ ဖားဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဝိုင်းက မသိဘူးတဲ့။ အထက်တန်းကျောင်းမှာတုန်းက မသင်ရဘူးလား သင်ခဲ့ရမှာပေါ့ ခုတော့ မေ့နေပြီ။ ဒီဓာတ်ပုံက ဖားဖြစ်လာပုံ အဆင်ဆင့်ကို ပြထားတာ ကလေးတွေတင် ဗဟုသုတရတာမဟုတ်ဘဲ လူကြီးတွေလည်း ဗဟုသုတရတာပဲနော်။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေ ဖားကိုမီးဖုတ်ပြီး စပါးလင်နိုင်နိုင်နဲ့ချက်ကျွှေးတာ သိပ်စားကောင်းတာပဲ။ ရှူး...တိုးတိုး ဟိုမှာ Fogs as Pets ဆိုပြီး ကလေးတွေကို ပညာပေးတယ် လူကြီးတွေက ဖားသား သိပ်စားကောင်းတယ်လို့တွေးနေတယ် ကောင်းကွာ။ ဖားတွေဟာ ကျင်လည်ကျက်စားတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်ပြီး အရောင်ပြောင်းနိုင်တော့ ရန်သူတွေက အလွယ်တကူ မတွေ့ နိုင်ဘူးတဲ့။
အရောင်တောက်တောက် ဖားတွေကို မြင်တာနဲ့ အဆိပ်ရှိမှန်း သိသာပါတယ်။ သစ်ခေါက်နဲ့ တူတဲ့ လိပ်၊ သစ်ရွက်နဲ့ တူတဲ့ ဖားတွေကို မှန်ပြတင်းပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်ပြီး ရှာဖွေကြပြီး မတွေ့ သေးတဲ့သူတွေကို ပြရတာလည်း တမျိုးပျော်စရာကောင်းတာပဲ။ အချိန်စေ့နေပြီမို့နေ့ လည်စာစားဖို့အချိန်မရှိတော့ဘဲ ရေသတ္တဝါပြတိုက်ကနေ ထွက်ခွာပြီး ဘေးနားက မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။ တဖက်ကမ်းကမြို့ က ဖီလာဒဲဖီးယားမြို့ နဲ့သိပ်တူတာပဲ။ မနှစ်က မန်မိုရီယမ်ဒေးပိတ်ရက်မှာ ဖီလာဒဲဖီးယားသွားတောလားထားတော့ ဖီလာဒဲဖီးယားမြို့ ကို မှတ်မိနေတယ်။ ကားပေါ်ရောက်တော့ တိုးဂိုက်က တဖက်ကမ်းကမြို့ က ဖီလာဒဲဖီးယားမြို့ ၊ နယူးဂျာဆီပြည်နယ်နဲ့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကို ခြားထားတဲ့ ဒဲလာဝဲယားမြစ်၊ ဒဲလားဝဲယားမြစ်ပေါ်ကနေ နယူးဂျာဆီပြည်နယ်နဲ့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ တံတားက ဘန်ဂျမင် ဖရန့် ကလင်းတံတားလို့ရှင်းပြပါတယ်။ ဘန်ဂျမင်ဖရန့် ကလင်းဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို တည်ထောင်သူ ဖခင်ကြီးတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ သိပ္ဗံပညာရှင်၊ တီထွင်သူ၊ သံတမန်၊ သူ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ။ ဒုတိယသွားရောက်လည်ပတ်မဲ့နေရာက ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် ကန်နက်စကွဲယားမြို့ က လောင်းဝုဂါးဒင်းဖြစ်ပြီး ရေသတ္တဝါပြတိုက်ကနေ မိုင် ၄၀၊ ၁ နာရီလောက် မောင်းရပါတယ်။
အရင်အပတ်တုန်းက နှင်းတွေကျတာ နယူးယောက်ပြည်နယ် ဘာဖဲလိုးမြို့နှင်းအောက်ပိနေတဲ့ပုံတွေ သတင်းမှာ မြင်ခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။ နယူးယောက်စီးတီးမှာတော့ နှင်းကျရုံပဲကျပဲ အရည်ပျော်သွားတယ်။ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်သွားတဲ့ လမ်းတလျှောက် နှင်းတွေဖွေးနေတာများ နှင်းကမ္ဗလာ ဖုံးလွှမ်းနေသလိုပါပဲ။ တိုးဂိုက်ရေဗင်က လောင်းဝုဂါးဒင်းအကြောင်း တရုတ်လို မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် ရှင်းပြပြီး အင်္ဂလိပ်လိုတော့ သစ်ပင်တွေ အများကြီးရှိတယ်၊ မှန်အဆောက်အဦးကို သွားလည်ကြနော်ဆိုပြီး ငါးမိနစ်လောက်ပဲ ရှင်းပြတယ်။ လောင်းဝုဂါးဒင်း Longwood Gardens ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး၊ အထင်ရှားဆုံး ပန်းခြံတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဧက ၁၀၀၀ ကျော် ကျယ်ပါတယ်။ ပန်းခြံရဲ့နေရာတော်တော်များများက နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေလို့မှန်လုံအဆောက်အဦးဆီ ချီတက်ကြပါတယ်။ အထဲကို ဝင်လိုက်ရင်ပဲ အမေရိကန်လေသံနဲ့Wow ! It's awesome, amazing, unbelievalbe, incredible. ဖြစ်သွားကြတယ်။ အထဲမှာ တော်တော့်ကို လှပါတယ် ပန်းခြံတော်တော်များများ အခမဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ လောင်းဝုပန်းခြံက ဝင်ကြေး ၂၅ ကျပ်ပေးရလို့ဈေးကြီးပေမဲ့ ဝင်ကြေးနဲ့ တန်အောင်ကုို လှပါတယ်။ လူအင်မတန်များလို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေဆိုရင် တန်းစီရတယ်။ သဲကန္တာရ၊ မုတ်သုံတော၊ အမေရိက၊ အာရှ၊ အမေရိကန်တောင်ပိုင်း ၊ မြောက်ပိုင်းက အပင်တွေကို ပြသထားတာ အင်မတန် စုံပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ ကယ်ပီတယ်မောက ဘောတနစ်ဂါးဒင်းထက် အပင်တွေ စုံတယ်။
၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် အချိန်ပေးထားတာမို့၂ နာရီကို လည်ပတ်မယ် ၁၅ မိနစ်ကို နေ့ လည်စာစားမယ်ဆိုပြီး ဝိုင်းက ကျောပိုးအိတ် သယ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် နဖူးပေါ်မှာ ဆံပင်တွေ ဝဲနေအောင် သပ်တင်ရတာနဲ့ ၊ ကျောပိုးအိတ်ကို ကျွန်မခြေထောက်နား ပြေးထားရတာနဲ့အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာပဲ။ ကျောပိုးအိတ် ပိုးထားပေမဲ့ ဓာတ်ပုံထဲမှာဆို ပခုံးပေါ်က ကြိုးနှစ်ချောင်းကိုပဲ မြင်ရတာလေဆိုတော့ ကျောပိုအိတ် ပိုးထားရင် ခါးကုန်းတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်လို့ထင်လို့ တဲ့။ နဖူးပေါ်မှာ ဆံပင်ဝဲမနေရင် နဖူးပြောင်ပြောင်ကြီး ဖြစ်နေတာ ကြည့်ရဆိုးလို့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် နဖူးပေါ် ဆံပင်သပ်တင်ရတာ အလုပ်တစ်ခု။ ကောက်ညှင်းထုပ်လို အထပ်ထပ် ဝတ်၊ လက်အိတ်၊ ခြေအိတ်၊ မာဖလာ ပတ်ရတော့ မျက်နှာလေးပဲ မြင်ရတဲ့ ဆောင်းတွင်းမှာ ဦးထုပ်ဆောင်းထားပြန်၊ မာဖလာကိုလည်း နှာခေါင်းနားရောက်အောင် ပတ်ထားတဲ့ ကျွန်မကတော့ ရှင်းတယ် ဦးထုပ်ကို နေရာတကျဖြစ်အောင် လုပ်ရတာတစ်ခုပဲ။ ဦးထုပ်၊ ကြိူးသိုင်းဘောင်းဘီ ဝတ်ထားတဲ့ အန်ကယ်၊ ခေါင်းမှာ အဖြူရောင်ပုဝါလေး အုပ်၊ ဂါဝန်အပြာ ဝတ်ထားတဲ့ အမ်းမစ်ခ်ျစုံတွဲကို တွေ့ လိုက်တယ်။ ဖီလာဒဲပီးယားသွားတောလား၊ နယူးဂျာဆီသွားတောလား ဖူးလို့ သာ အန်းမစ်ခ်ျမှန်း သိတာ။
မှန်လုံအဆောက်အဦးအနှံ့လည်ပြီးတော့ အချိန်က ၂၀ မိနစ်လောက် ပိုနေသေးတော့ ဘယ်ကိုသွားလည်သင့်သလဲလို့ဝန်ထမ်းကို မေးကြည့်တော့ ဟိုနားလေးမှာ ပြတိုက်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ သွားလည်သင့်တယ်တဲ့။ ပြတိုက်ရောက်တော့ တချို့ က ဗွီဒီယိုကြည့်လို့တချို့ က လေ့လာကြည့်ရှုလို့ နဲ့စည်ကားနေတာပါပဲ။ ဝန်ထမ်းအဘွားက အာရှသူ ဘယ်နေရာတွေကို ကြည့်သင့်တယ်လို့ညွှန်ပေးပါတယ်။ အာရှသူပေမဲ့ အမေရိကန်လို ဝန်ဆောင်မှုပေးတော့ တလောတုန်းက ဖေ့ဘွတ်မှာရှယ်တဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတစ်ခုကို သတိရမိတယ်။ ဥရောပသားဝိတ်တာနဲ့အာရှသားဝိတ်တာ ခြားနားပုံ အကြောင်းပါ။ အစားအသောက်မှာရင် မရတဲ့ဟာဆိုရင် ဥရောပသားဝိတ်တာက ဘယ်ဟာလေးက ကောင်းတယ်၊ စားသောက်ပြီးရင်လည်း စားကောင်းလား၊ ဘာတွေလိုအပ်သလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အဝ ပေးပါတယ်။ အာရှသားဝိတ်တာကတော့ စကားပြောတာ မပြောချင်သလို၊ အလုပ်မလုပ်ချင်သလို၊ ကာစတာမာကိုလည်း မလေးစား မခြေမငံဆက်ဆံ၊ စားသောက်လို့ တောင် မပြီးတော့ဘူး ပန်းကန်ကို အတင်းလာသိမ်းနဲ့ ။ နည်းနည်းတော့ အိုဗာဖြစ်ပေမဲ့ တော်တော်များများ မှန်ပါတယ်။ ရထားသေးသေးလေး ပြေးလွှားနေတဲ့ နေရာမှာ ကလေးတွေ အုံနေတာပဲ။ တီးလုံးသံတွေကြားတော့ ဘာများလဲလို့သွားကြည့်တာ တေးသွားအလုိုက်ပြောင်းတဲ့ ဝါးတားဖောင်တိန်အကပါ။ ဝိုင်းက နွေရာသီမှာ လောင်းဝုဂါးဒင်းကို ပြန်လာချင်သေးပါတယ်တဲ့။
ဒီတခေါက် ခရီးသည်တွေက အချိန်လေးစားတယ် နောက်ကျလည်း ငါးမိနစ်လောက်ပဲ။ ဝိုင်းက မနက်က သူကြော်လာတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်ကို နေ့ လည်စာအဖြစ်စားပြီး ကျွန်မကတော့ ကိုယ်တုိုင်လုပ်လာတဲ့ ဆန်းဒွတ်စ်စားတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဆန်းဒွတ်စ်ဆိုလို့အထင်မကြီးနဲ့ ဦး ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ်ကို မက်ယွန်းနစ်သုတ်၊ တူနာထည့်၊ ချိစ်တစ်ပြား ပစ်ထည့်လိုက်တဲ့ ဆန်းဒွတ်စ်ပါ။ နောက်ဆုံးလည်ပတ်မဲ့ နေရာကတော့ လောင်းဝုပန်းခြံကနေ မိုင် ၅၀၊ ၁ နာရီသာသာ အဝေးက ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် ရီးဒင်းမြို့ မှာရှိတဲ့ ကိုဇာခရစ်စမတ်ရွာလေးပါ Koziar's Christmas Village ။ မနက်စောစော ထရတာနဲ့ ၊ နေ့ လည်စာ စားပြီးလို့မျက်စိစင်းလာတာနဲ့ငိုက်မျဉ်းလိုက်တာ တိုးဂိုက်က ခရစ်စမတ်ရွာကို ရောက်ပါတော့မယ်လို့ကြေငြာတော့မှပဲ နှိုးတော့တယ်။ အဝေးကနေ မြင်ရတဲ့ ခရစ်စမတ်ရွာလေးက မီးရောင်စုံတွေ ပြိုးပျက်ကာ လှပနေပါတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း အတော်အေးတယ် လက်အိတ်ချွှတ်လိုက်ရင် လက်ကို ကျဉ်တက်လာတာပဲ။ လူတွေကလည်း ကျိတ်ကျိတ်တိုး။ တိုးဂိတ်က ၁ နာရီ အချိန်ပေးပါတယ်။ စုရပ်ကို မသိတော့ရင် အမေရိကန်အလံ မီးလင်းနေတဲ့ နေရာကိုသာ မှန်းပြီးလာခဲ့ပါတဲ့။ မီးရောင်စုံတွေ ထွန်းထားတာ အင်မတန်လှပါတယ် ကလေးတွေသာမက လူကြီးတွေလည်း ပျော်ကြတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်က သီတင်းကျွှတ်ကို သတိရတယ်။
EF-S 18 - 135 mm Lens တပ်ထားတဲ့ Canon 7D လွယ်ထားတဲ့ ကျွန်မကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကင်မရာမန်းလားလို့မေးကြတိုင်း My camera is professional but I am not professional, just ameture. လို့ပြန်ဖြေလေ့ ရှိပါတယ်။ ကင်မရာကသာ ပရောက်ဖက်ရှင်နယ် ကျွန်မက ကင်မရာကို Auto ထားပြီးပဲ ရိုက်တတ်တယ်။ တခြား function တွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ ဘယ်လိုသုံးရမှန်း မသိဘူး။ ကင်မရာနဲ့Lens ကြောင့်သာ ပုံကောင်းကောင်းထွက်နေတာ။ ဒီလိုခရစ်စမတ်မီးကို ဘယ်လိုရိုက်ရမှန်းမသိဘူး။ Auto mode က ကင်မရာက လူကို ထိန်းချုပ်တယ်။ အမှန်က လူက ကင်မရာက ထိန်းချုပ်ရမှာ။ Shame on me လို့ကျွန်မက ပြောတော့ ဝိုင်းက အဲဒါကြောင့် သူ့ အစ်မလတ် နီကွန်က နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ ကင်မရာကို လိုချင်နေတာကို သူက ခွင့်မပြုတာတဲ့။ ဈေးသင့်ရုံလေးဝယ် ကင်မရာ၊ ဓာတ်ပုံအကြောင်း နည်းနည်းနားလည်တော့မှ ကင်မရာကြီးတွေ ဝယ်သင့်တာတဲ့။ ဓာတ်ပုံလှလှတွေ မရပေမဲ့လည်း ခရစ်မစတ်မီးရောင်စုံကြားမှာ လမ်းလျှောက်ရတာ ပျော်စရာပါပဲ။ အချိန်စေ့ပြီမို့ကားဆီပြန်မယ်ဆိုတော့ စုရပ်က ဘယ်နေရာမှန်း မသိတော့ဘူး။ တိုးဂိုက်ပြောထားတဲ့ အမေရိကန်အလံဆီကို သွားပြီး ကားပါကင်မှာ သွားရှာတော့ တိုးကားကို တွေ့ တယ်။
ညနေစာကို တရုတ်ဘူဖေးဆိုင်မှာ သွားစားတော့ တက်စ်၊ တစ်ဖ်အပြီး ၁၆ ကျပ် ကျတယ်။ တရုတ်စာတွေက မဆိုးပေမဲ့ ဆူရှီကတော့ မကောင်းဘူး။ ဖားသားကြော်တွေ့ ပေမဲ့ အက်ဗန်ရှားရေသတ္တဝါပြတိုက်က အရောင်တောက်တောက် ဖားတွေကို သတိရလို့တစ်ခုပဲ စားနိုင်တယ်။ လတ်ဆပ်လို့ လား မသိဘူး ခရုကတော့ အတော်စားကောင်းတယ်။ ဒီနေ့ ည တည်းမဲ့ဟိုတယ်က ကြမ်းပိုးနာမည်ကြီးလို့အိပ်ယာတွေ အရင်စစ်ပြီး ကြမ်းပိုးရှိတယ်လို့သံသယရှိရင် တိုးဂိုက်ဆီ ချက်ချင်းသတင်းပို့ ပါ နောက်တစ်ခန်း လဲပေးပါမယ်တဲ့။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ကျောပိုးအိတ်တွေကို ပစ်ချပြီး မွေ့ ယာမှာ ကြမ်းပိုးရှိမရှိ ရှာဖွေရေး စကြတယ်။ ဝိုင်းက ရေမိုးချိုး၊ Ebook Reader နဲ့စာဖတ်ချိန်နေမှာ ကျွန်မက အိပ်ပျော်နေပြီ။ ဝိုင်း လန့် အော်မှပဲ နှိုးတော့တယ် သူ့ ဘေးနားက မီးအိမ်က ရုတ်တရက် မီးမှိတ်သွားလို့ခလုတ်သွားဖွင့်တာ ဓာတ်နှစ်ခါတောင် လိုက်တယ်တဲ့။ ခုတင်နှစ်ခုကြားက မီးကလည်း လင်းလွန်းတော့ ခေါင်းအုံးနှစ်ခုကို ထောင်လိုက် အဲဒါဆို မီးအလင်းရောင် စူးတာ သက်သာသွားမယ်။ ရေချိုးခန်းထဲက ပုဝါနှစ်ခုကို ယူပြီး မီးအုပ်ဆောင်းမှာ ပတ်လိုက်တော့ ညမီးနီးပါးလောက် ဖြစ်သွားတယ်။ ရာသီဥတု အေးတာရော၊ မနက်က စောစော ထလာရတာရော၊ ရုံးတက်ရက်တွေတုန်းက ပင်ပန်းတာရောနဲ့နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတာ မနက် ၇ နာရီခွဲ မောနင်းကော နှိုးတော့မှပဲ နှိုးတော့တယ်။ ဒုတိယနေ့ မှာ သွားရောက်လည်ပတ်တာတွေကို အပိုင်း ၂ ကျမှ ဆက်ရအောင်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၄။
ပိတ်ရက်တွေဆိုရင် လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ နဲ့နယူးယောက်တခွင် စူးစမ်းလေ့လာရင်း သိခဲ့သမျှလေးတွေကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ မက်ဟန်တန် Manhattan ရဲ့တောင်ဖက်မှာရှိတဲ့ စတေတန်းအိုင်လန် Staten Island ဆီကို အောက်မက်ဟန်တန်ကနေ နာရီဝက်တိုင်း ဖယ်ရီတွေ ရှိပါတယ်။ လစ်ဘာတီရုပ်တုဘေးကနေ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ဖယ်ရီခရီးစဉ်က အင်မတန်သာယာပြီး ၂၄ နာရီပတ်လုံး ရှိသလို အခမဲ့ပါ။ Things to do in NYC တစ်ခုပဲ ဆိုပါတော့။ စတေတန်းအိုင်လန် အခမဲ့ဖယ်ရီစီး၊ ရထားစီး၊ နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ သမိုင်းဝင် ရစ်မွန် Richmond မြို့ က ဒတ်ခ်ျ၊ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီရယ်အဆောက်အဦးတွေ၊ ရှေးခေတ်ကလို ဝတ်ဆင်ကြပြီး ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ ပြထားတဲ့ အိမ်တွေကို ဝင်ကြည့်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်က သုံးစွဲခဲ့တာတွေ ပြသထားတယ်။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ ရေနံဆီမီးအိမ်ကို တွေ့ ခဲ့လို့အမေ့ကို မှာရဦးမယ် ရေနံဆီမီးအိမ်တွေ့ ရင် သိမ်းထားပါလို့။ အဲဒါတွေက ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ဖြစ်နေပြီ။
မိနစ် ၂၀ လောက် တောင်တက်ပြီးတော့မှ ရောက်တဲ့ တိဘက်ပြတိုက်က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ တောင်ကုန်းမြင့်လေးကနေ စိမ်းညှို့ ညှို့သစ်တောအုပ်တွေ၊ တောင်ခြေက လူနေအိမ်တွေ၊ လေတိုက်တိုင်း ဆည်းလည်းသံလေး မြည်နေတာ အေးချမ်းလှပါတယ်။ ဝိုင်းအစ်မလတ် တိဘက်ကို သွားလည်တာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တဲ့။ ရေမြေတောတောင်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရာသီဥတုက အရှေ့ တောင်အာရှနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်။ အပြန်ကျတော့လည်း သစ်တောအုပ်ကို ဖြတ်ရပြန်တော့ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ရွန်က poison ivy အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ poison ivy ဆိုတာ မြောက်အမေရိကနဲ့အာရှမှာ ပေါက်တဲ့ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သုံးရွက်ဆိုင်နေတဲ့ သစ်ရွက်တွေက အဆိပ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဆိပ်ဆိုပေမဲ့ လူကိုသေစေလောက်တဲ့ အဆိပ်မဟုတ်ဘဲ ယားယံတာ၊ မီးလောင်ဖုလို အနာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ poison ivy မှန်း ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ အရွက်သုံးရွက်က ပူးကပ်နေတတ်တယ်၊ ဒုတိယနဲ့ တတိယက မျက်နှာချင်းဆိုင်နေတယ်၊ ပထမရွက်က တခြားနှစ်ရွက်ထက် နည်းနည်းလေး မြှင့်နေတတ်တယ်၊ သစ်ရွက်အဖျားတွေက ချွှန်းနေတတ်တယ်တဲ့။ ကျွန်မ မှတ်မိသလောက် ရေးလိုက်တာပါ poison ivy မှန်း သိစေတဲ့ တခြားအချက်တွေ ရှိပါဦးမယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဂူဂယ်မှာ ရှာပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်မက်ဟန်တန် ထရိုင်ယန်ခံတပ်ပန်းခြံ Fort Tryon ဖက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်ကြတော့ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟန့် ခ်က အမေရိကန်တော်လှန်ရေးကာလတုန်းက ဝါရှင်တန်ခံတပ်တိုက်ပွဲက အဲဒီမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါတဲ့။ ခံတပ်ကနေ ကြည့်လိုက်ရင် ဟတ်ဆန်ဖြစ်၊ နယူးဂျာဆီဖက်ခြမ်း၊ ယူအက်စ်မှာ ယဉ်ကြောအကျပ်ဆုံး၊ အမြဲတမ်း ကားတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေတတ်တဲ့ ဂျော့ဝါရှင်တန်တံတားကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီတုန်းက ရွန်အဖွဲ့ နဲ့ရောက်ဖူးထားလို့သာယာမှန်း သိပေမဲ့ ဆောင်းဦးရာသီမှာ ပိုလှပါတယ်။ ပန်းပုပညာရှင် ဂျော့ဂရေးဘားနတ် စုဆောင်းထားတဲ့ မစ်ဒစ်ပယ်အနုပညာ medieval art တွေကို သူဋ္ဌေးကြီးရော့ခါဖယ်လာက ဝယ်ယူပြီးတော့ Metropolitan Museum of Art ကို လှုဒါန်းကာ The Cloisters ပြတိုက်အဖြစ် ပြသထားပါတယ်။ ဝင်ကြေးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ သဒ္ဓါကြေးပေးလို့ရပါတယ်။ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ပြတိုက်လေးပါ။ ထရိုင်ယန်ခံတပ်နဲ့ဆက်နေတာက အင်ဝု Inwood ပန်းခြံပါ။ မက်ဟန်တန်ကပန်းခြံနဲ့မတူတဲ့ အချက်ကတော့ အင်ဝုပန်းခြံက လူတွေပြုလုပ်ထားတာ မဟုတ်တဲ့ သဘာဝပန်းခြံစစ်စစ်တစ်ခုပါ။
နယူးယောက်ရောက်လို့ မှ စင်ထရယ်ပါ့ခ်ပန်းခြံကို မရောက်ဘူးဆိုရင် နယူးယောက်ရောက်တယ်လို့ဘယ်ဆိုနိုင်ပါ့မလဲလို့ပြောကြပါတယ်။ စင်ထရယ်ပါ့ခ်ပန်းခြံက သဘာဝပန်းခြံမဟုတ်ဘဲ လူသားတွေ ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ ပန်းခြံပါ။ စင်ထရယ်ပါ့ခ်က ကျယ်လွန်းတာမို့ တစ်ခေါက်တည်းနဲ့မနှံ့ ပါဘူး။ အလယ်၊ အရှေ့ ၊ အနောက် ခွဲလည်ပါမှ နှံ့ ပါမယ်။ free walking tours တွေ ရှိပြီး တိုးဂိုက်တွေ ရှင်းပြတဲ့ စင်ထရယ်ပါ့ခ် သမိုင်းကြောင်းက အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အင်ဝုပန်းခြံမှာ မာဘယ်၊ ထုံးကျောက်၊ သဲကျောက်၊ schist ( မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိ) ကျောက်တွေ ရှိပါတယ်။ မက်ဟန်တန်အထက်ဖက် ဘရောင်းစ်သားတွေက Bronx is full of brown stones. Manhattan is full of schist (shit ဟု အသံထွက်သည်) တို့ ဘရောင်းစ်မှာက အညိုရောင်ကျောက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ မင်းတို့မက်ဟန်တန်မှာတော့ ရှစ် ( shit ဆဲရေးသည့်အခါတွင် သုံးသည့်စကားလုံး) တွေကြီးပါလားကွလို့နှိပ်ကွပ်တတ်ပါသတဲ့။ အင်ဝုပန်းခြံမှာ ဆားကျောက်တွေရှိလို့ရေငှက်တွေ ကျက်စားပါတယ်။ အနီရောင်အမြှီးရှိတဲ့ သိမ်းငှက်ကြီး red - tailed hawks ၊ ဇီးကွက် owls ၊ ထိပ်ပြောင်သိမ်းငှက် bald eagles တွေ နေထိုင်ကျက်စားတဲ့ပန်းခြံဖြစ်ဖို့ငါးနှစ်စီမံကိန်းချပြီး လုပ်ဆောင်နေတာ ခုတခေါက်မှာတော့ The Cloisters ပြတိုက်အမိုးပေါ်မှာ အစာလာဖမ်းတဲ့ သိမ်းငှက်ကို တွေ့ လိုက်ရတယ်။
ငှက်ဆို ကြက်တူရွေး၊ ကျီးကန်း၊ ခုိုလောက်သာ သိတဲ့ ကျွန်မက သိမ်းငှက်မှန်း မသိပါဘူး။ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ ထဲက အဘိုးကြီးတစ်ယောက်က ပြောပြလို့ သာ သိမ်းငှက်မှန်း သိတာ။ နေ့ တိုင်း မှန်ပြောင်းသယ်ပါရဲ့ဒီနေ့ မှ မေ့ကျန်ခဲ့တယ်လို့အဘိုးကြီးက မချင့်မရဲ ဖြစ်နေလေရဲ့ ။ ကြည့်ရတာ ငှက်ကြည့်ဝါသနာပါတဲ့သူနဲ့ တူတယ်။ အဲဒီလို ငှက်ကြည့်ဝါသနာပါတဲ့၊ ငှက်မြင်တာနဲ့ဘာငှက်မှန်း ဒက်ခနဲသိတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကို ဖျပ်ခနဲ သတိရမိတယ်။ မှန်းကြည့်စမ်းပါ ဘယ်သူလဲလို့ ။ ဒီနားတဝိုက်မှာ ၁၇ ရာစုတုန်းက ဒေသခံအမေရိကန် တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ ဒေသခံတွေ ဘာလို့ဒီနေရာမှာ အခြေချကြသလဲဆိုတော့ ဒီအနီးအနားတဝိုက်မှာ ပေါက်ရောက်တဲ့ ကျူးလစ် tulip ပင်တွေကြောင့်ပါတဲ့။ ကျူးလစ်ပင်စည်က ဖြောင့်တန်းနေပြီး သစ်ကိုင်းခက်တွေ ရှင်းနေတော့ လှေထွင်းဖို့အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ ဒဏရီအရတော့ ၁၆၂၆ ခုနှစ် ကျူးလစ်ပင်အောက်မှာ နယူးနယ်သာလန် ဂျင်နရယ်ဒါရိုက်တာက ဒေသခံတွေဆီကနေ နယ်သာလန်ငွေကြေး ၆၀ နဲ့ညီမျှတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မက်ဟန်တန်ကို ဝယ်ယူခဲ့ပါသတဲ့။ ကျောက်ဂူတွေမှာ homeless အိမ်ခြေမဲ့တွေ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှပ်သရုပ်ဆောင် ဆင်မြူရယ် အယ်လ် ဂျက်ဆန်က အဲဒီကျောက်ဂူမှာ နေထိုင်တဲ့ homeless အိမ်ခြေမဲ့အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တောင် ရှိပါသတဲ့။
ဟန့် ခ် နောက်ဆုံး ရှင်းပြတဲ့ အပင်က ဂင်းကို Gingko လို့အမည်ရတဲ့ အပင်ပါ။ မူလဇာတိက တရုတ်ပြည်က ဖြစ်ပြီး နယူးယောက်တခွင် အဲဒီအပင်တွေ စိုက်ပျိုးနေပါသတဲ့။ ဟုတ်ပါ့ အဲဒီတော့မှ သတိထားမိတယ် ကျွန်မတို့ လမ်း၊ ရပ်ကွက်တဝိုက်မှာ အဲဒီအပင်တွေချည်းပဲ။ အရွက်လေးက ထူးခြားတယ် မြင်းခွာရွက်နဲ့ ဆင်တယ်။ ဆောင်းဦးရာသီမှာ တပင်လုံး ဝါလို့ ။ တလောက နယူးယောက် ဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်း wonderland tour မှာ ပါဝင်တော့ ဂိုက်က အသက် ၆၀ ကျော် အဘိုးကြီး။ အရွက်မရှိတော့တဲ့ ဂင်းကိုပင်ကို ထိုးပြပြီး အဖိုလား၊ အမလားတဲ့။ အဖွဲ့ ထဲက ဆက်ကျော်သက် ကောင်မလေးက အပွင့်ပွင့်လို့အနံ့ ရရင် အဖို၊ အမ ခွဲနိုင်တယ်တဲ့။ အမပင်က အသီးသီးတော့ လူစုလူဝေးတဲ့ water fountain နားမှာ မစိုက်ဘဲ အဖိုပင်ပဲ စိုက်ပါသတဲ့။ မင်းတို့ က အေးရှန်းလား ဟုတ်ကဲ့ ဒီဂင်းကိုပင်က ကနဦးတုန်းကတော့ အမေရိကန်မှာ ရှိချင်ရှိခဲ့မှာပေါ့။ နောက်တော့ မျိုးတုန်းသွားတယ်နဲ့တူပါရဲ့အမေရိကန်မှာ မရှိတော့ဘူး။ တရုတ်ပြည်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းမှာတော့ မြင့်မြတ်တဲ့အပင်ဆိုပြီး ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းထားလို့ဂင်းကိုပင်ကို ပြန်တွေ့ တာကွ။ သဘာဝဘေးဒဏ် ခံနိုင်ရည်စွမ်း မြှင့်တယ်၊ ဂရင်းဟောက်စ်အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုပြီး နယူးယောက်တခွင်မှာ စိုက်ပျိုးနေကြလေရဲ့ ။ အသီးက နံပေမဲ့ ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အစေ့ကို စားကြတယ်။
မင်းတို့သစ်ပင်တွေ Photosynthesis လုပ်တာ သိလား။ အပင်တွေက အမြစ်က ရတဲ့ ရေ၊ လေထဲက နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ ၊ နေရောင်ခြည်နဲ့ဓာတ်ပြုပြီး အပင်အတွက် ဂလူးဂို့ စ်ထုတ်၊ လေထဲကို အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ပြန်ထုတ်တာ။ မှန်တယ် ဆောင်းတွင်းမှာ သစ်ရွက်တွေ မရှိတော့တဲ့အခါ ဖိုတိုဆင်းသယ်ဆစ် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အယ်...ဟုတ်သားပဲ ဘယ်လိုလုပ်သလဲဟင်။ နွေရာသီမှာ နေရောင်ခြည် လုံလုံလောက်လောက်ရတော့ အစိမ်းခြယ်ဓာတ်တွေ များနေလို့သစ်ရွက်တွေ စိမ်းနေတာ။ နေ့ တာတိုတဲ့ ဆောင်းဦးမှာ သစ်ရွက်တွေ အရောင်ပြောင်းလာတာ နေရောင်ခြည် လုံလုံလောက်လောက် မရတော့လို့အစိမ်းရောင်ခြယ်ဓာတ်တွေ နည်းလာလို့ ကွ။ သစ်ရွက်တွေ အရောင်ပြောင်းလာရင် မကြာခင် ဆောင်းတွင်းရောက်တော့မယ်လို့သစ်ပင်တွေက သိကြတယ်။ မေပယ်ပင်တွေရဲ့သစ်ရွက်တွေမှာ ဂလူးကို့ စ်တွေ ရှိနေတဲ့ နေရာက အနီရောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဝက်သစ်ချပင် Oak ဆို အနီရောင်ကနေ အညိုရောင် ပြောင်းသွားတယ်။ မေပယ်ပင်ကနေ သကြား၊ syrup (ပန်ကိတ် pancake ပေါ်မှာဆမ်းတဲ့ သကာရည်) ထုတ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ သိသလား။ ဗာမွန်သွား တောလားတုန်းက နယူးအင်္ဂလန် မေပယ်ပြတိုက်မှာ အဲဒီအကြောင်း ဖတ်ခဲ့၊ ဗီဒီယို ကြည့်ခဲ့ရလို့ သိပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ သစ်ပင်တွေက ဖိုတိုဆင်းသယ်ဆစ် မလုပ်တော့ဘဲ အိပ်နေကြတာကွဲ့ ။
သစ်ပင်တွေရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တွေက တခုနဲ့ တခု မတူဘူး၊ အလှတစ်မျိုးစီ။ ဒီအပင်ဆို တောင်ဖက်ပိုင်းမှာ ပေါက်တဲ့အပင် သူ့ အမြစ်တွေက မြေပေါ်မှာ နည်းနည်းလေး ပေါ်နေတတ်တယ် လေရှုဖို့ ။ ပင်စည်ကို ထွင်းလိုက်တိုင်း အပင်က သေသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ သစ်ခေါက်တွေက အထပ်လိုက်ဆိုတော့ ထွင်းလို့ ရတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားက Redwood ပန်းခြံက သစ်ပင်ကို မြင်ဖူးကြတယ်မလား အလယ်မှာ ကားသွားလို့ရတယ်လေ။ သစ်ပင်တွေရဲ့အခေါက်က တခုနဲ့ တခု မတူပြန်ဘူး အလှတစ်မျိုးစီ။ ဘယ်သစ်ပင်က ပင်စည်အချောမွတ်ဆုံးလဲ ။ American peach မှန်တယ်။ ပင်စည်ချောမွတ်လို့နာမည်တွေ ရေးထွင်းတာ အခံရဆုံး။ ဘောတနစ်ဂါးဒင်းမို့နိုင်ငံခြားက အပင်တွေကို စုံလင်အောင် စိုက်ပျိုးထားတယ်။ တချို့ က ကွန်ပလိန်းကြတယ် ဘာလုို့နိုင်ငံခြားအပင်တွေ စိုက်ပျိုးတာလဲတဲ့။ ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းမှာ စိုက်ပျိုးထားတော့ တကမ္ဘာလုံးက အပင်တွေ မြင်ရတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ National Park Ranger နေရှင်နယ်ပါ့ခ်ရိန်းဂျားတွေက အပတ်တိုင်း သစ်ပင်တွေ အရောင်ပြောင်းတာ၊ အသီး၊ အပွင့်ပွင့်တာ၊ သစ်ရွက်ကြွေတာတွေကို မှတ်တမ်းမှတ်ပြီး ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲမှာ သစ်ပင်တွေ အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို စောင့်ကြည့်ကြတယ်။
ကျေးဇူးတော်နေ့ပိတ်ရက်မှာ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကို ခရီးသွားတော့ လည်ပတ်ခဲ့တာ Adventure aquarium ရေသတ္တဝါပြတိုက်ပါ။ အက်ကေဒီးယား တောလားတုန်းက ကွန်နက်တီးကပ်ပြည်နယ် မစ်စတစ်ရေသတ္တဝါပြတိုက်၊ နိုင်အာဂရာရေသတ္တဝါပြတိုက်တွေ လည်ပတ်ဖူးသားမို့ရေသတ္တဝါပြတိုက်တွေက တခုနဲ့ တခု ထူးမခြားနားပါပဲ။ ဒီ အက်ဗန်ရှား ရေသတ္တဝါပြတိုက်က Hippo ရေမြင်းရှိလို့နည်းနည်းထူးခြားတယ်။ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ ဇုန်လေးခုရှိရာမှာ အားလုံးနှံ့ အောင် လည်ပြီးတော့ kids zone ဆိုတဲ့ ကလေးတွေကို ပညာပေးတဲ့အခန်းကို ဝင်လည်ပါတယ်။ ဖားတပိုင်း၊ ငါးတပိုင်းကို ပြပြီး ဝိုင်းရေ အဲဒါ ဖားလောင်းလို့ပြောတော့ ဝိုင်းက မသိဘူးတဲ့။ ဟင်... အထက်တန်းကျောင်းမှာ မသင်ရဘူးလား သင်ခဲ့ရမှာပေါ့ မေ့နေပြီလေ။ ဥကနေ ဖားဖြစ်ပုံအဆင့်ဆင့် ပြသထားတဲ့ ပန်းချီကို မြင်တော့ ဝိုင်းက kids zone ဆိုပေမဲ့ ကလေးတွေသာ ပညာရတာ မဟုတ်ဘူး လူကြီးတွေလည်း ပညာရတာပဲနော်တဲ့။ ဝိုင်း နင် ဖားသား စားလား စားတယ်။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေ ဖားသားမီးဖုတ် စပါးလင်နိုင်နိုင်နဲ့ချက်ကျွှေးတာ သိပ်စားကောင်းတာပဲ။ ရှူး... တိုးတိုး ဟိုမှာတွေ့ လား Fogs as Pets ဆိုပြိး ကလေးတွေကို ပညာပေးတာ လူကြီးတွေက ဖားသား စားကောင်းတယ်လို့တွေးနေတယ် ကောင်းရော။
ညစာကုို တရုတ်ဘူဖေးဆိုင်မှာ စားတော့ ဖားသားကြော်တွေကို တွေ့ တော့ ရေသတ္တဝါပြတိုက်က အရောင်တောက်တောက် အဆိပ်ရှိတဲ့ ဖားတွေကို သတိရသွားတယ်။ ငါးမန်းတွေ တွေ့ တော့ ဝိုင်း သိလား ငါးမန်းတောင်က ဈေးကောင်းတယ် တချို့ ဆို ငါးမန်းတောင်ကိုပဲ ဖြတ်ယူကြတာ ရှိတယ်။ တရုတ်မင်္ဂလာပွဲမှာ ငါးမန်းတောင်ဟင်းချို ကျွှေးနိုင်မှ ဂုဏ်ရှိတယ်လို့မှတ်ကြတယ်။ ခုဆို ငါးမန်းက မျိုးတုန်းမယ့်စာရင်း ဝင်နေပြီ။ ငါးတွေ ဖမ်းဆီးလွန်းလို့နောင်အနှစ်ငါးဆယ်ဆိုရင် ငါးဆိုတာ ပြတိုက်မှာပဲ ရှိတော့မယ်တဲ့။ ရှူး တိုးတိုး ငါးမန်းတောင်ဟင်းချိုသောက်ဖို့တွေးနေတဲ့ တရုတ်ငတိမလေးတွေလို့ထင်သွားဦးမယ်။
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး လမ်းလျှောက်ရင်း သိခဲ့တာလေးတွေပါ။
ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄။